သရဖူ ဗိုလျလုပှဲ – My Blog
“….အေး…ဟုတျတယျ…..ငါလဲကွားဖူးတယျ…..စောကျခေါငျးနကျတဲ့ မိနျးမကို ခေါငျးအုံး ခုပွီး လုပျမှအားရဆိုဘဲ….ခါးအောကျ ခေါငျးအုံးခုလိုကျတော့ သားအိမျဝက မွငျ့တကျလာပွီး လီးထိပျနဲ့ဆောငျ့မိတော့ ပိုကောငျးဆိုဘဲကှ….” တူးတူးက သူကွားဖူးသမြှ ကို အားပါးတရပွောနစေဉျ အောငျထှနျးက… “….ခေါငျးအုံးခုလိုးတာတော့ ဟုတျပါပွီ……မိနျးမတဈယောကျ စောကျခေါငျးနကျ မနကျ ဘယျလိုလုပျသိမှာလဲ…..သူ့ထမီလှနျပွီး လကျနဲ့ထိုးကွညျ့ရမှာလား…” “…..နငျ့..အမကေလှားမှဘဲ….လကျနဲ့ထိုးကွညျ့လို့ရမ လားဟ….ပါးကြိုး ထောငျကသြှားမှာပေါ့……ခှီးဈ တဲ့မှာဘဲ….တုံးလိုကျတာ….” တူးတူးကအောငျထှနျးကိုကလျောတုတျလိုကျ သညျ။“…..ဒါဖွငျ့ရငျ….စောကျခေါငျးနကျ မနကျသိဘို့ ပွောလကှော…” အောငျထှနျးက သူ့အမကေို ထိပါးပွီးပွောလာသော တူး တူးကို မကမြေနပျသံဖွငျ့ မေးလိုကျ၏။
“…..ပွောလိမျ့မပေါ့ကှာ…မငျးကိုက လောနတေဲ့ဥစ်စာ “ ဘာစကားမှ မပွောဘဲငွိမျနားထောငျနသေော စိုးလှငျက ကွားဝငျပွော လိုကျသညျ။ “….ငါဖတျဖူးတဲ့ ကာမသြှတ်တရ စာအုပျထဲမှာ အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ပေါ့လေ…. ဖငျကောကျတဲ့မိနျးမဟာ…စောကျ ခေါငျးနကျသတဲ့ကှ……သာမာနျကိုမဟုတျဘဲ… သိသိသာသာကောကျတဲ့မိနျးမပေါ့ကှာ…” “…..အျော….အေး..အေး…ရှာတောငျပိုငျး က ပဲပွုတျသညျ မရငျမိ လိုပေါ့နျော..” အောငျထှနျးကလညျး သူ့ဝသီအတိုငျး ဝငျထောကျခံသညျ။စိုးလှငျက အောငျထှနျးကို မကြေ မနပျနှငျ့ မကျြစောငျးထိုးလိုကျ၏။ “….နောကျတဈခါကိုမွငျ့ကြျောတို့ပွောတာလဲကွားဖူးတယျကှ….ခကျြနဲ့စောကျဖုတျဟာ သိသိ သာသာကွီးသာမာနျထကျဝေးကှာနရေငျလဲစောကျခေါငျးနကျဆိုဘဲငါတှေးကွညျ့တယျပေါ့ကှာ…..ဖငျက အဆမတနျကောကျမှ တော့…ခကျြနဲ့ စောကျဖုတျက အလိုလိုဝေးပွီးပေါ့ကှ…ဒီတော့ သခြောပေါကျကို စောကျခေါငျးနကျတဲ့ အမြိုးအစားလို့သိရမှာ ဘဲ….စောကျခေါငျးနကျတဲ့မိနျးမရဲ့ယောကျြားဟာလီးတိုအမြိုးအစားဆိုရငျတော့ သခြောပွီမောငျရေ…..ဒီမိနျးမ အားမရလို့ လငျငယျနမှောဘဲ…..”
“….တောကျ…ဟုတျလိုကျလကှော….တူးတူး….တူးတူးနဲ့ တို့အထဲမှာ ထူးခွားနတောက ဒီလိုမြိုးဗဟုသုတတှေ နှံ့စပျလို့ ကိုး….စောစောကပွောတဲ့ မရငျမိကွီးကလငျငယျနတေယျမောငျ….ကိုကြျောဆှရေယျကိုနကျကွီး..ရယျ..ဦးစံမွငျ့ရယျ…. (၃)ယောကျတောငျဘဲ ခငျမြာ…..” “…..ခှေးမသား….မသိပဲနဲ့ရမျးပွောနေ…စောကျပွဿနာတကျနမေယျ….” တူးတူးက ခပျခဉျြ ခဉျြနှငျ့ ပွောပွဈလိုကျသညျ။စိုးလှငျကတော့ ဘာမှမပွော အောငျထှနျးက အလှနျစောကျမွငျကပျစှာမကျြစောငျးထိုးလိုကျသညျ။“… အေးမငျးပွောတဲ့ပတေံနဲ့ထောကျပွီး မှနျးဆကွညျ့ရငျ မရငျမိယောကျြား ကိုသနျးဆှဟောသခြောပေါကျလီးတိုရမယျကှ…တိုရုံ တောငျမကဘူး…သေးတောငျ သေးခငျြမှာ….”အောငျထှနျးကတော့ မကျြစောငျးထိုးထိုး…..ဆဲဆဲ..သူ့ညဉျကိုတော့ လုံးဝမဖြောကျ။ အခုကွညျ့ ——– သူပွောခငျြရာကို ဇှတျပွောသညျ။တဈဦးနှငျ့တဈဦးဉာဉျစရိုကျခွငျး မတူကွသျောလညျး ငယျငယျကထဲက လညျပငျးဖကျကွီးလာသော တဈရှာတညျးနေ တဈရတေညျးသောကျ သကျတူ-ရှယျတူ-အတနျးတူဘဝတူသူငယျခငျြးအရငျးခေါကျ ခေါကျတှေ မဟုတျပါလား။
“…ဒါနဲ့…နစေမျးပါအုံး…ကိုကြျောဆှေ…ကိုနကျကွီး…ဦးစံမွငျ့တို့ သုံးယောကျနဲ့ ဖွဈနတေဲ့ မရငျမိ ဇာတျလမျးပွောစမျးပါအုံး…ဟုတျ ကော ဟုတျလို့လားကှ…မငျးက သိပျစိတျခရြတာ မဟုတျဘူး…” တူးတူးက အောငျထှနျးကို အရေးတယူမေးလာသညျ့အတှကျ အောငျထှနျးတဈယောကျ ဘဝငျမွငျ့သှားသညျ။ဒီကောငျက မွှောကျပေးရငျ ဂှေးပျေါအောငျကမညျ့လူစား။ ဆဲဆဲဆိုဆို ပွုံးဖွီးဖွီးနေ တတျတဲ့ အကောငျ။ အခု သူ့ကို တူးတူးက အရေးတယူ မေးလာသောအခါ သဘောတှေ စှတျကသြှား၏။ နှုတျနညျးသော စိုးလှငျ သညျပငျ အောငျထှနျးစကားကို အလှနျသိခငျြကွားခငျြ နကွေောငျး သူ့မကျြလုံးတှကေ သကျသခေံနေ၏။ “…ဒီလိုကှ…ကိုကြျော ဆှတေို့နဲ့ဖွဈနတေယျဆိုတာ အမရေယျ…မခဈြရယျ… မနုရယျ သုံးယောကျသား ဝိုငျးဖှဲ့ပွောနတောကို ငါကကွားလိုကျရတာ..အဲဒီ နကေ့ ငါနမေကောငျးလို့ အခနျးထဲမှာ အိပျနတော…သူတို့သုံးယောကျက သနျးရှာရငျး မရငျမိ စောကျတငျးတှေ ခနြကွေတာပေါ့ ကှာ…”
“….ဟား..ဟား…ဟိုသီခငျြးလိုပေါ့နျော…သူမြားအကွောငျးလဲ မပွောတတျပါ… စပျမိစပျရာ…ဘာညာကှိကှ…ဟားဟား အေးအေး လုပျစမျးပါအုံး…ဒို့ကလဲ တဆငျ့ ကှိကှရအောငျ…” တူးတူးအပွောကွောငျ့စိုးလှငျမကျြနှာကွီးသညျပငျ ပွုံးပွုံးဖွီးဖွီးကွီးဖွဈလာ တော့၏။ အားပါးတရ နားထောငျမညျ့ဟနျကအပွညျ့။ အောငျထှနျးက တကျကွှသော အသံနှငျ့ သူ့စကားကို ပွနျဆကျသညျ။ “….မရငျမိ အကွောငျးကို သူတှသေ့မြှ ဖောကျသညျခတြာက မနုရယျ….သူပွောတာက ဒီလိုကှ…..” သညျနေ့ ကိုကြျောဆှထေံမှ ယူထားသော ငှတေဈသောငျးအတှကျ တဈလပွညျ့၍ အတိုးသတျရနျ မနုထှကျလာသညျ။စောစောပေးပွီး အေးတာပဲဟူသော စိတျကူးဖွငျ့နလေ့ညျစာထမငျးစားပွီးထှကျလာသညျ။ကိုကြျောဆှသေညျ ရှာထဲက အိမျတှငျမနဘေဲ ရှာအပွငျဘကျရှိ သူပိုငျ သရကျ ခွံထဲတှငျ နထေိုငျ၏။သရကျခွံက ပနှေဈရာကြျောပတျလညျရှိ၍ အတျော ကယျြဝနျးသညျ။အဓိကအားဖွငျ့ ရငျကှဲမြိုးသနျ့မြားကို စိုကျပြိုးထားသညျ။
သညျသရကျခွံကရသောငှမှော တဈနှဈတဈနှဈ သိနျးခြီဝငျသညျ။ဂြုံ-ပဲ-မွပေဲ ပဲစငျးငုံမြားလှောငျ၍ ဈေးကောငျးရမှ ထုတျရောငျး သဖွငျ့ သူ့လကျဖြားတှငျ ငှသေီးနသေညျ။တဈရှာလုံး သူ့အကွှေးနှငျ့ ကငျးသူရှားသညျ။ လှနျခဲ့သော တဈနှဈခနျ့က သူ့မိနျးမဆုံးသှား ရာ………………….. နောကျအိမျထောငျမပွုတော့ဘဲ မုဆိုးဖိုဘဝနှငျ့နထေိုငျလြှကျ ရှိသညျ။ အသကျက ၄၀ ကြျောရုံသာရှိ ပွီ….အရှယျတငျ ကနျြးမာသနျစှမျး၏။ အိမျထောငျပွုလြှငျ ရသေးသျောလညျး အပိုဒုက်ခမရှာတော့ဘဲ…အခြောငျရနိုငျသညျ့စားကှငျး စားကှကျမြားနှငျ့သာပြျောမှနေ့သေညျသားသမီးနှဈယောကျရှိရာ သမီးအကွီးက ၂၀ ကြျော၊သားအငယျက ၁၇ နှဈ ရှာထဲကအိမျတှငျ ကိုကြျောဆှအေ့မ အပြိုကွီးနှငျ့ အတူနကွေသညျ။ သူကမူ သရကျခွံထဲတှငျ နှဈစဉျ ၃ ခနျးမွစေိုကျအိမျတဈလုံးဆောကျ၍ လှတျလပျစှာ နထေိုငျသညျ။ မနုတဈယောကျ ကိုကြျောဆှထေံအလာတှငျ အိမျသာတကျခငျြ၍ သရကျခွံ အနောကျဖကျကပျလြှကျရှိ ခြောငျးထဲသှား၍ အိမျသာတကျသညျ။ကိစ်စဝိစ်စပွီးတော့ ခြောငျးဘကျကတကျလာပွီး သရကျခွံနောကျဖေးဘကျက အလှယျတကူ ဝငျလာခဲ့သညျ။နလေ့ညျနခေ့ငျးဖွဈ၍ လူသူတိတျဆိတျနသေညျ။
တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ ကိုကြျောဆှေ မွစေိုကျအိမျနားရောကျလာသညျ။ ဘာရယျ ညာရယျမဟုတျ မိနျးမပီပီ စပျစုခငျြ၍ ကိုကြျောဆှေ့ အိမျအတှငျးသို့ ထရံအပေါကျမှ ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ။သူခြောငျးကွညျ့သော နရောက အိမျနောကျခနျး။ အခနျးတှငျး မွငျလိုကျ ရသော မွငျကှငျးက မနုကို ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈသှားစသေညျ။ အခနျးထဲက ကုတငျပျေါတှငျ မရငျမိနှငျ့ ကိုကြျောဆှတေို့ အဝတျအစားမပါဗလာကိုယျတုံးလုံးကွီးနှငျ့ကာမဇာတျခငျးနကွေသညျ။ မရငျမိက ခါးအောကျတှငျ ခေါငျးအုံးတဈလုံးခုထားပွီး ဒူးထောငျပေါငျကား အနအေထားဖွငျ့ ခံလြှကျရှိပွီး………. ကိုကြျောဆှကေ ပေါငျနှဈလုံးကွားသို့ ဒူးထောကျထိုငျကာ သူ့လကျနှဈ ဖကျကို မရငျမိ ကိုယျပျေါမှ ကြျောခှပွီး ကုနျး၍ ကုနျး၍ ဆောငျ့လိုးနသေညျ။ ကိုကြျောဆှေ၏ ဆောငျ့ခကျြတှကေ မာနျပါပွငျးထနျ လှသညျ။မရငျမိ ကလညျး ကိုကြျောဆှေ၏ခါးကို တငျးနအေောငျဖကျလြှကျ ဖငျဆုံကွီးကို ပငျ့ထိုး မွှောကျကော့လြှကျ အားရပါးရခံ နသေညျ။ “…ဖှတျ…ဖှတျ…ဖှပျ…ဘှတျ….” “….ဖှတျ….ဖှတျ…ဖှပျ….ဘှတျ….” “….အမေ့….အမလေး….ကောငျးလိုကျတာ ကို ကြျောဆှရေဲ့…အငျ့…ရှီး ကြှတျ.. ကြှတျ လိုးပါ…ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးစမျးပါ…” သညျမြှအထိ ဆောငျ့လိုးနတောတောငျ ဆောငျ့ခိုငျးပုံ ထောကျ၍ မရငျမိ ကာမရာဂ စိတျတှေ မညျမြှထကွှသောငျးကွမျးနကွေောငျး သိသာလှနျးလှသညျ။
တောသူဆိုသျောလညျး မရငျမိ အသားအရညျတှကေ တရုတျမတဈယောကျလို အလားနီးစပျသူဖွဈ၏။ရငျ၊တငျ၊အသား အရောငျ….ကိုယျဟနျအနအေထားကို ကွညျ့သောအားဖွငျ့ တဏှာရာဂ အလှနျကွီးမားသော ဟတ်ထနီအမြိုးအစား ဖွဈသညျ။ ကို ကြျောဆှကေ လကျနှဈဖကျထောကျ၍ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနရောမှ ဘယျလကျကို ရုတျလိုကျပွီးမရငျမိနို့အုံဖှေးဖှေးမို့မို့တငျးတငျးကွီး ပျေါအုပျတငျလိုကျလြှကျပှတျခလြေူးလှိမျ့လိုကျသညျ။ “…..ထိရဲ့လား….ရငျမိ…” “…အား…အမေ့….အငျး….ထိ…ထိတယျ…..ကို ကြျောဆှရေဲ့….အီး..ရှီး….ကြှတျ…ကြှတျ….ကောငျးလိုကျတာရှငျ…..” စောကျဖုတျကွီး….လီးကွီးတှမေို့လားမသိ….ဖှတျ…ဖတျ… ဘှတျ… ဟူသော အသံကွီး တှကေ ကွကျသီးထအသဲယားစရာ ကောငျးလှနျးလှပါသညျ။မနုတဈယောကျ ခြောငျးကွညျ့နရေငျးက ပငျစောကျဖုတျအုံတဈခုလုံး ပုရှကျဆိတျအကောငျတဈရာ တကျလာသလို တရှရှနှငျ့ ထကွှလာသညျ။
ရငျတှပေူ အာခေါငျတှေ ခြောကျလာသဖွငျ့ တံတှေးကို မကွာခဏ မြိုခနြရေ၏လညျပငျးကွောကွီးတှထေောငျကာ သူကလညျး အသညျးအသနျ ခြောငျးကွညျ့နေ၏ ကိုကြျောဆှေ ဖငျကွောကွီးတှကေ ကြုံ့ဝငျရှုံ့ခှကျနပွေီး ခပျသှကျသှကျကွီး ကပျညှောငျ့ နသေညျ။ “….ဖှတျ…ရှတျ…ဖှဈ…ဖှတျ….” “….အား….အမလေး….ထိ….ထိလိုကျတာရှငျ….သားအိမျဝကို ပူရှိနျးကဉျြဆိမျ့နတော ဘဲ အ…ဟ….ဟငျ့…အမေ့…အမလေး….အေ့…..စောကျစိပါထိသတော့….အားလားလား… အီးအီးရှီး…အ……” မရငျမိတကိုယျ လုံး တဆတျဆတျတုနျလြှကျ ကိုကြျောဆှခေါးကွီးကို တငျးကပျြ နအေောငျ ဖကျထားသညျ။ ကိုကြျောဆှေ့ လကျနှဈဖကျက အနညျးငယျတုတျသယောငျယောငျရှိသော ရငျမိခါးကို ဆုတျကိုငျလြှကျ ခေါငျးမော့ကိုယျမတျကာ သူ့လီးကွီးကို အဆုံးထိ ဖိ ကပျထားလိုကျပွီး လရတှေကေို ပနျးထညျ့နသေညျ။သူ့ကိုယျလုံးကွီးလညျး ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ တုနျတုနျသှား၏။
အခွအေနအေခြိနျအခါ သိသူပီပီ ကိုကြျောဆှကေ သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျသညျအကွောပွိုငျးပွိုငျးထလြှကျအညိုရောငျသမျး နသေောလီးတုတျရှညျကွီးကမကနြေပျသောဟနျနှငျ့မာနျဟုနျမပွသေေးသညျ့ အမူအယာကိုပွနသေေး၏။ မနုတဈယောကျ ဆုံးခနျးတိုငျရောကျထိ ကွညျ့ခငျြလှနျးလှသျောလညျး အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ စောစောက သူမ ခြီးပါခဲ့ရာ ခြောငျးထဲသို့ ပွနျ ဆငျးလာခဲ့သညျ။ လီးအတှအေ့ကွုံနောကထြေားပွီးဖွဈသော အိမျထောငျသညျ မိနျးမပငျ ဖွဈလငျ့ကစား ကိုကြျောဆှေ့ လီးကွီးကို မွငျလိုကျရသောအခါ ဖငျယားအဖုတျတောငျ ရမ်မကျသှေးတှေ ပူလောငျဆူပှကျခဲ့ရ၏။ “….မငျးဇာတျလမျးက ကောငျးလှနျးလို့ မကျြလုံးထဲမှာ ကှငျးကနဲ…ကှကျကနဲကို မွငျလာတော့တာပဲကှာ…ငါတောငျ မရငျမိကွီးကို ခခြငျြစိတျတှေ ပေါကျလာပွီ…”
“…အလကားတော့ မရလောကျဘူး ကိုယျ့လူ…ငှခြေေးနိုငျမှ… ဒါမှ အတိုးမယူဘဲ လိုးလှတျလို့ရမှာပေါ့ကှ….” အောငျထှနျးက သူ့ ထငျမွငျခကျြကို ခပျဆဆလေး ပွောလိုကျ၏။ “….တဏှာကွီးတဲ့မိနျးမအဖို့ ငှကေပဓာန မဟုတျပါဘူးကှာ…လီးက အဓိကပါ..” အခု ဝငျပွောသူက စိုးလှငျ…စိုးလှငျက သညျပှဲတှငျ သူ့ဉာဉျအတိုငျး ဘာမှဝငျမပွောဘဲ အသာနားထောငျခဲ့သညျ။သညျလိုလူမြိုးက အပွောသမားမဟုတျ လကျတှလေု့ပျမညျ့ သူမြိုး။နောကျပွီး သူ့ကိုယျသူ ယုံကွညျစိတျခသြောဟနျအပွညျ့နှငျ့ ပွောလိုကျခွငျး ဖွဈ၏။ “…..အေး….ဒါလဲ …..ဟုတျပါရဲ့….” စိုးလှငျစကားကို တိုးတိုးက ထောကျခံလိုကျ၏။
“…ဘယျလောကျပဲ တဏှာကွီးကွီး အညှာကိုငျတတျရငျ အရညျတောငျ ပြျောသှားနိုငျပါတယျကှာ…”တိုးတိုးက စိုးလှငျစကားကိုပငျ သခြောအောငျထပျဆငျ့၍ ထောကျခံပွောလိုကျသညျ။ “….လုပျပါအုံး…တိုးတိုးရ….အညှာဆိုတာ ဘာတုံးဟ…” ထုံးစံအတိုငျး အောငျထှနျးက သိခငျြဇောနှငျ့အမောတကော မေးလိုကျ၏။ သညျတခါတော့ စိုးလှငျက သူ့ကို မကျြစောငျး မထိုးတော့ပါ… အူကွောငျကွောငျ မွောကျကွှကွှသူငယျခငျြးကို ပွုံးလြှကျသာ ကွညျ့လိုကျပါတော့သညျ။ “…..အညှာဆိုတာ စောကျစိပေါ့ ကှာ….စောကျစိကလိတတျရငျ…ကာမမီးတှေ ပှငျ့ထှကျပွီး ဘယျမိနျးမခံနိုငျမှာလဲ…ဒါပမေဲ့ မရငျမိလိုဟာကွီးကတော့ အထှအေထူး တောငျ ကလိစရာလိုမှာမဟုတျဘူး…လီးကွီးဖို့နဲ့ခပျကွာကွာအလိုးသနျဘို့ဘဲလိုမှာ.. မငျးက ဒီမိနျးမကွီးကို…ဖွိုနိုငျလို့လား….”
တိုးတိုးက အောငျထှနျးကို အဓိကဦးတညျပွီး မေးငေါ့မေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ စိုးလှငျကလညျး ဘယျ့နှယျ့လဲဟူသော အမူအရာနှငျ့ အောငျထှနျးကို စိုကျကွညျ့နသေညျ။ စကားပေါ နှုတျသှကျသော အောငျထှနျးတဈယောကျ အသံတိတျ နှုတျဆိတျရငျး ခတ်ေတတှေး နသေညျ။ “…..အငျး…မလှယျလောကျဘူးထငျတယျ….တိုးတိုးရေ…အလိုးသနျတယျပဲ ထားအုံး… ကိုယျ့ဒငျက စံခြိနျမှီရုံပဲ..ရှိတယျ လေ….ဒီတော့ သူ့စောကျဖုတျကွီးကို အယားဖြောကျ ပေးသလောကျပဲရှိမှာပေါ့…ဟီး…ဟီး….” “….အေး…မငျး မဆိုးဘူး….ကိုယျ့ ပမာဏကို သိတယျ…”စိုးလှငျက အောငျထှနျးစကားကို ဝငျထောကျခံလိုကျ၏။အောငျထှနျးက သူ့ကို သရျောသညျထငျ၍ ဘုကွညျ့ ကွညျ့နစေဉျ တိုးတိုးကဝငျ၍… “…..စိုးလှငျ ပွောတာအမှနျပဲ အောငျထှနျးရ….မငျးက သူ့ကို တလှဲမထငျနဲ့….မငျး မပွောနဲ့…ငါလဲ မ ရငျမိကို မဖွိုနိုငျဘူးမောငျ….တကယျပွောတာ သူ့အသားအရကွေညျ့ အသားနီစပျ…ဖငျဆုံကွီးကလဲ..နဲတာကွီးမဟုတျဘူး…
ပွီး တော့ နောကျကောကျထှကျ နတောလဲအထငျအရှားလိုးတော့လိုးခငျြစရာကွီးပေါ့ကှာ….ဟား ဟား…ဒါပမေဲ့ ဟတ်ထနီရဲ့ သဘာဝက အလိုးလဲကွမျး…လီးလဲကွီးမှ…ကနြေပျတာဘဲကှ… ဒီတော့ မနိုငျဝနျသှားထမျးရငျ မငျးတို့ငါတို့ဘဲ ခွကေုနျလကျပမျး ကသြှားမှာပေါ့ ဟ…” “….အငျး ဒီလိုဆို…..သူ့ကိုဖွိုနိုငျတာ ကိုကြျောဆှဘေဲ နမှောပေါ့နျော…” “…..လူလတျပိုငျးအရှယျထဲမှာတော့ ဟုတျခငျြဟုတျ မှာပေ့….မငျးတို့ငါတို့ တကျခတျေလူတှထေဲမှာ..လောလောဆယျ..ဒျီမိနျးမကွီးကို အပွတျဖွိုနိုငျမှာကတော့.. ဟောဒီ စိုးလှငျဘဲ မောငျရငျ….” “…..ဟာ…ဟုတျပါ့မလားကှာ…” “….မငျးကဲ…ကိုယျ့သူငယျခငျြးအကွောငျး…သိရကျသားနဲ့…ဒီကောငျ့လျောက ငယျ ငယျကထဲက ဒို့ထကျကွီးတယျလေ…သူကလကျတှသေ့မား…အခွခေံ စံခြိနျမှီ လီးကွီးကို နညျးမြိုးစုံနဲ့ လကေ့ငျြ့ပေးနတော…အခု ဆိုရငျ စံခြိနျတောငျ အတျောလှနျ နပွေီ….ပွီးတော့ မငျးတို့ ငါတို့ထကျ လူကောငျကထှားပွီးတောငျ့တငျးကွံ့ခိုငျတယျလေ လကျလှဲ ရငျ…..ဒို့….သူ့ကို ဘယျတုံးကနိုငျဘူးလို့လဲ….”
“….အေး…အဲဒါတော့ ဟုတျတယျ…ဒါပမေဲ့…ဒီကောငျ့ဒုတျကွီး စံခြိနျလှနျ ဖွဈသှားတာတော့ တကယျမသိဘူးကှ…” “….သူငယျခငျြး….သခြောသှားအောငျ ပွလိုကျစမျးပါကှာ…” တိုးတိုးက စိုးလှငျကို တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ စိုးလှငျက ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျပွီး ပုဆိုးကို ခပျဟဟ လှနျပွလိုကျသညျ။ အားပါးပါး…..နညျးတဲ့လီးကွီး မဟုတျပါလား… အတုတျက ရုပျပြို ဆေးဗူးခနျ့ရှိပွီး အရှညျက ရှဈလကျမခနျ့ရှိမညျ။လီးကွီးက အောကျခွတှေငျကှပျပွဈကွီးပျေါတှငျ ခေါငျစငျးစငျးကွီးလဲလြောငျး တှဲလဲကနြေ၏။ ဒဈလညျးမပွဲသေး….ထိပျဖူးခြှနျကွီးနှငျ့ဖွဈ၏။လီးကွီးက အဝါဘကျလုသော အညိုရောငျဖွဈ၏။စိုးလှငျက ပွနျဖုံး ပွီး ထိုငျလိုကျသညျ။သူ့မကျြနှာမှာလညျး ပနျးနုရောငျ ပွေး၍ ပွုံးရောငျသနျးနသေညျ။
“….အေး…ဟုတျပါပွီ…..မရငျမိ စောကျဖုတျကွီးကို ဖွိုနိုငျမဲ့လီးကွီးဆိုတာ ယုံပါပွီကှာ ဟား..ဟား…ဟား….” အောငျထှနျးက သူငယျခငျြးအတှကျ ဂုဏျယူကနြေပျစှာ ပွောလိုကျသညျ။တိုးတိုး ကလညျး အောငျထှနျးစကားကို ဖွညျ့စှကျထောကျခံ၏။“……အခု ခြိနျမှာတော့ မရငျမိရဲ့စောကျဖုတျသရဖူကွီးကို ခနျြပီယံ ကိုကြျောဆှကေပိုငျခငျြပိုငျထားမှာပေါ့ကှာ….ဒါပမေဲ့ ဒီစောကျဖုတျသရဖူ ကွီးကို ပွိုငျလုမဲ့ ပွိုငျဘကျခနျြပီယံစိုးလှငျရှိနပွေီလေ….ပွီးတော့ဟိုကလေးဆယျကြျောကလြူပါ….ဒို့ကောငျက အားကောငျး မောငျးသနျ ပြိုရှယျဟနျ အပွညျ့ရှိတဲ့ (၁၈)နှဈကြျော လူပြိုသိုးပဲကှ…..ဟား ဟား…ဟား…” “…..ဟာ….ဒီလိုဆို…ဟုတျပီကှ….”
တိုးတိုးစကားနှငျ့ ရယျသံအဆုံးတှငျ အောငျထှနျးအလနျ့တကွားထအျောပါတော့သညျ။“….ဟ..ဘာလဲဟ….လခှီးတဲ့မှဘဲ….မငျးဟာ က အလနျ့တကွားကှာ…” စိုးလှငျက အောငျထှနျးကို ထကွိမျးသညျ။အရယျအမောအရှိနျကွောငျ့သာ။အောငျထှနျး ထအျောလိုကျပုံ က တိုးတိုးသညျပငျ လနျ့သှား၍ ထောငျးကနဲ ဒေါခီးသှားမိသညျ။ “….ဒီလို…ဒီလို…ငါ့စိတျကူးက ဒီလို…မရငျမိကို ကိုကြျောဆှနေဲ့ စိုးလှငျတို့ ပွိုငျလိုးကွမယျကှာ….လောငျးကွေးကို သိနျးခြီတငျမယျလေ…” “….အေး..ကောငျးတယျ…” အောငျထှနျး တငျပွခကျြ ကို တိုးတိုးက ထောကျခံ၏။တိုးတိုးက တဆကျတညျး စိုးလှငျ ဘကျကိုလှညျ့၍ “…..ဘယျနှယျ့လဲ….ဟကေ့ောငျ….” “….လုပျ လိုကျလေ….ကွာသလားလို့….” ကိုကြျောဆှနှေငျ့ အကအြေလညျညှိပွီး ပွိုငျပှဲကငျြးပရနျ ရကျသတျမှတျသညျ။ မရငျမိနှငျ့ညှိရနျ ကိုကြျောဆှကေို သဘောတူ တာဝနျပေးကွသညျ။ဤသို့ဖွငျ့ သတျမှတျရကျတှငျ ပွိုငျပှဲကို စတငျကငျြးပ၏။
ကိုကြျောဆှေ-တူးတူး+အောငျထှနျး+စိုးလှငျ တို့သညျ အောကျပါ စညျးကမျးခကျြမြား သတျမှတျထားပွီးဖွဈ၏။ ပထမအခြီတှငျ အနှုးအနှပျမပါဘဲ တဈနာရီခှဲဆကျတိုကျလိုးရမညျ။ ကွိုကျသလို ပုံစံနှငျ့လိုးနိုငျသညျ။လိုးခှငျ့ရှိသညျ။အလိုးခံသူက တျောပါတော့ဟု ဆိုမှ ပှဲရပျမညျ။ ဒုတိယအခြီတှငျ အနှုးအနှပျ အနှိုကျအဆှ စိတျကွိုကျလုပျနိုငျသညျ။ အခြိနျလညျး အကနျ့အသတျမရှိ။သို့သျော ၂ နာရီထကျကြျောလြှငျ အရှုံးဟု သတျမှတျသညျ။ မိနျးမကိုယျတိုငျက တျောပါပွီဟု အလေးအနကျအဆိုပွုလာမှ ပှဲရပျမညျ။အလိုးခံ မညျ့သူသညျ နောကျတဈရကျဆကျတိုကျခံနိုငျလြှငျ အရှုံး။မခံနိုငျလောကျ အောငျပြော့ခှခြေိနဲ့၍ မလုပျပါသေးနှငျ့ဦးဟု တောငျးပနျပါ က အနိုငျ။ ဤအရှုံးအနိုငျသတျမှတျခကျြသညျ အလိုးခံသူမိနျးမနှငျ့ မညျသို့မြှ သကျဆိုငျခွငျး မရှိစရေ။ ပွိုငျပှဲမစမီ ရကျမြားတှငျ စားဆေး-လိမျးဆေး ကွိုကျရာသုံးနိုငျပွီး ပွိုငျပှဲစမညျ့နတှေ့ငျမူ မညျသညျ့အရာမှ မသုံးစှဲရ…အထူးသဖွငျ့လိမျးဆေးလုံးဝမသုံးရ။
မိမိကိုယျကို ယောကျြားပီသသူဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံကွညျလြှငျ လိမျးဆေးလုံးဝ မသုံးသငျ့ကွောငျး အထူးသတိပွုပါ။(မှတျခကျြ) လောငျးကွေးငှကေို သုံးသိနျးခှဲစီ သတျမှတျသညျ။နိုငျသူက မရငျမိကို တဈသိနျးတိတိပေးရမညျ။ထိုနကေ့ သူတို့လေးယောကျ ည ၁၁ နာရီခှဲကြျောမှ စညျးမဉျြးရေးဆှဲပွီးကွသညျ။ ကိုကြျောဆှကေ သူ့ကိုယျသူအပိုငျတှကျ၍ အကယျ၍ သူရှုံးခဲ့လြှငျ ဟောဒီ သရကျ ခွံကွီးတဝကျပါ ထပျလောငျး၍ ပေးဦးမညျဟု ပွော၏။ထိုအခကျြကိုလညျး စညျးမဉျြးထဲတှငျ နောကျတိုးအဖွဈ ဖွညျ့စှကျလိုကျ သညျ။ အကယျ၍ သူနိုငျခဲ့လြှငျ မငျးတို့(၃)ယောကျရဲ့ အမတှေကေို (၃)ညစီ လိုးရလိမျ့မညျ။မငျးတို့ကိုယျတိုငျ ချေါခဲ့ရမညျဟု အဆိုပွုသညျ။
သုံးယောကျသား ခေါငျးခွငျးရိုကျ၍ သဘောတူလိုကျကွသညျ။ မတတျနိုငျ သူ့ဘကျကလညျး ရကျရောသညျမဟုတျလား။ “နအေုံး ဗြ…..ခငျမြားအဆိုကို ကြုပျတို့မကနျ့ကှကျပါဘူး….ဒါပမေဲ့ ခငျမြားပွောတဲ့ မိနျးမသုံးယောကျက ကြုပျတို့ရဲ့အနန်တဂိုဏျးဝငျ ကြေးဇူးရှငျတှေ ဖွဈနတေယျ။ကြုပျတို့မှာ ဂိုဏျးသငျ့နိုငျတယျ…….ဒီတော့ သရကျခွံ တဝကျမလုပျပါနဲ့.. သရကျတဈခွံလုံးလုပျ လိုကျပါ….” ဤစကားကို စိုးလှငျက ဝငျပွောခွငျးဖွဈ၏။တိုးတိုးနှငျ့အောငျထှနျးတို့မှာခေါငျးတှပေူထူနသေဖွငျ့ ဘာမှ စဉျးစားလို့ အကွံမရ…သူတို့အမတှေကေိုထိပါးမညျ့အရေးကွုံလာတော့ ခွောကျခွားတုနျလှုပျသှားကွသညျ။ စကားနညျးလှသော စိုးလှငျက သာ ထောကျပွအဆိုပွုနိုငျခွငျးဖွဈသညျ။ ကိုကြျောဆှကေ မညျသို့မှ စဉျးစားမနတေော့ဘဲ……….. “….အေး….စိမျလိုကျ ကှာ…..တဈခုတော့ရှိတယျနျော….အဲဒီနကြေ့ ငါအရငျဖိုကျမှာ…” “….ကနြေပျပါတယျ……” စိုးလှငျကပငျ အတညျပွုထောကျခံ လိုကျသညျ။ ဒီနေ့…..ကိုကြျောဆှေ စတငျပွိုငျပှဲဝငျရမညျနေ့ မရငျမိတဈယောကျ ရမေိုးခြိုး သနပျခါး လိမျး၍ ခါတိုငျးလိုပငျ ပဲပွုတျ ရောငျးထှကျသညျ။ခါတိုငျးလညျး လူသူမကှဲမှီ ဝလေီဝလေငျး အနောကျဖကျရှာသို့ ပထမ ရောငျးလရှေိ့သညျ။
အနောကျဖကျရှာရောငျးမကုနျမှ ရှာထဲလိုကျရောငျးသညျ။အနညျးဆုံး ၉ နာရီကြျောမှသာ အိမျပွနျ ရောကျလရှေိ့သညျ။ အနညျးဆုံး သူဈေးရောငျးခြိနျ ၃ နာရီကြျော ပုံမှနျကွာလရှေိ့သညျ။ ဤသညျကား ကလေးလူကွီးပါမကနျြ တရှာလုံးသိနသေော မ ရငျမိဈေးရောငျးခြိနျ ဖွဈသညျထိုအခြိနျကိုတမငျရှေးလိုကျကွသညျ။သညျတော့မညျသူမှမသိနိုငျမရိပျမိနိုငျတော့… စောစောကမူ အခြိနျရှေးဘို့အတှကျ အခကျတှနေ့ကွေရာ သညျအကွံကို စိုးလှငျက ပေးလိုကျမှ အဆငျပွေ ပွလေညျသှားတော့၏။ ကိုကြျော ဆှတေဈယောကျ သူ့ပွိုငျဘကျစိုးလှငျကို လြှော့မတှကျ သာတော့……သို့သျော သူ့ကိုယျသူ သိပျအထငျကွီးနေ၍ နှားပြိုသနျလှ…. နှားအိုပေါငျကြိုးဟူသော စကားပုံကို အသစှေဲကိုငျထား၍ သိပျတော့မဖွုံလှပါ။ လူလုံးမကှဲခငျမှာပငျ မရငျမိတဈယောကျ ပဲပွုတျ တောငျးလေးခေါငျးပျေါ ရှကျ၍ သရကျခွံအနောကျဘကျခြောငျးထဲမှ ဝငျလာသညျမကွာခငျလုပျငနျးစပါတော့သညျ။တိုးတိုးတို့ ၃ ယောကျက သီးသနျ့ လုပျထားသောနရောမှ ကွညျ့နကွေသညျ။ဤနရောကို မရငျမိ မသိအောငျ ဝှကျထားကွ သညျ။သိလြှငျ စိတျအ နှောကျအယှကျဖွဈပွီး ဖီလငျမလာမှစိုး၍ ဖွဈ၏။
မရငျမိက သူ့ကိုပျေါက အဝတျအစားမြားကို တခုခွငျးခြှတျသညျသူ့ကိုယျမှာဖုံးထားသောအရာဟူ၍ထမီပါးပါးတထညျ…..အပျေါအ ကြီင်ျလကျတိုတထညျနို့အုံပငျလုံအောငျမဖုံးနိုငျသောဘရာစီယာခပျသေးသေးတဈထညျသညျသာ…. ထို့ကွောငျ့ စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးမှာ ပငျ ကမ်ဘာဦးလူမကဲ့သို့ တုံးလုံးကွီးဖွဈသှားပွီ။ အခနျးထဲတှငျ ပုံစံမြိုးစုံလုပျနိုငျရနျ ၂ ပခှေဲအမွငျ့ စားပှဲခုံရှညျ…. နောကျမှီ ခုံရှညျ အလတျစားတဈလုံးအဆငျသငျ့ခထြား၏။တိုးတိုးတို့သုံးယောကျကို အလယျခနျး အထကျစီးမှကွညျ့နိုငျရနျလြှို့ဝှကျစီစဉျပေး ထား၏။စိုးလှငျကမူ ပွိုငျဘကျမငျးသားဖွဈ၍ အပွငျဘကျမှာသာနပွေီး အခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့အကဲခတျရနျသတျမှတျ ထားသညျ။ ကိုကြျောဆှကေ မရငျမိကို ခုတငျဘောငျတနျးပျေါ လကျထောကျပွီး ရှသေို့ ဖငျကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ။သူက နောကျမှ နေ၍ သူ့လီးတုနျကွီးကို လကျနှငျ့ကိုငျကာ တဈရဈခငျြးဖိသှငျးလိုကျသညျခြောငျးကွညျ့နသေော တိုးတိုးနှငျ့အောငျထှနျးတို့ မကျြလုံးပွူးသှားကွ၏။ ကိုကြျောဆှေ လီးကွီးက နညျးတဲ့ဟာကွီးမဟုတျ။လီးခြောငျးကွီးက နကျမှောငျနပွေီး သှေးကွော ဖုကွီး တှေ ယှကျသမျးနသေညျ။စိုးလှငျ လီးနှငျ့မတိမျးမယိမျးပငျ………ဒဈပွဲ အသားဆိုငျကွီးက နဲတာကွီးမဟုတျ…သံခမောကျကွီးလို ဝငျးပွောငျနေ၏။
သမ်ဘာရငျ…ဝါရငျ့ဆရာကွီးလညျးဖွဈ…လီးကွီးကလညျး စိုးလှငျနှငျ့ မတိမျးမယိမျးမို့ တိုးတိုးနှဈယောကျ ရငျခုံနသေညျဖီလငျတကျ စရာအလှနျကောငျးသော မရငျမိကိုယျလုံးကွီးကို မွငျနရေလြှကျကပငျ ဖီးလျမကွှနိုငျဘဲ ရငျတမမဖွဈနကွေသညျ။ သူတို့ရှုံးခဲ့ လြှငျ သူတို့အမမြေားကို သူတို့ကိုယျတိုငျချေါခဲ့ပွီး ကိုကြျောဆှထေံ ဆကျသရမညျကို တှေးမိတိုငျး စိတျတှခြေောကျခွားနေ၏။သူ တို့ကိုယျတိုငျ ဆပျဆော့မိသညျ့ အမှားမို့ နောငျတစိတျတှေ ဖွဈပျေါလာ၏။ စောစောကပငျ ခံခငျြစိတျကွောငျ့ စောကျဖုတျကွီး တ အုံလုံးကွှရှနပွေီး စောကျရတှေကေလညျး ထှကျနှငျ့ပွီးသားမို့ လီးကွီးက ထဈငေါ့ ထဈငေါ့နှငျ့ အဆုံးထိ ဝငျသှားသညျ။သညျလီး ကွီးကို ခံဘူးထားသျောလညျး စံခြိနျလှနျလီးမဟာကွီးမို့ မရငျမိ တဈယောကျ တဈထဈခွငျး တဈထဈခွငျးတိုးဝငျလာသော လီးကွီး ကို မကျြလုံးမှိတျ အံကွိတျရငျးခံနရှောသညျ။တဈခကျြတဈခကျြ ဖငျဆုံကွီးတှေ ကော့တကျသှား၏။ ကိုကြျောဆှကေ ခါးနှဈဖကျကို ခပျတငျးတငျးဆုတျ၍ ခပျပွငျးပွငျးပငျ ဆောငျ့လိုးပါတော့သညျ။ပထမဆောငျ့သောအခြိနျကို စတငျသတျမှတျသညျမို့ တဈဖကျနံရံရှိ တိုငျကပျနာရီကို ကွညျ့လိုကျသညျ။(၆)နာရီမတျတငျး….။
“……ဖှပျ…ရှတျ…ဖှတျ….ရှတျ….ဖှတျ…..” “….အငျ့….အမေ့…အီး…အား….ဟား… ဟငျး….အငျ့..အငျး…အ….အား…” ခပျသှကျသှကျ ခပျမှနျမှနျကွီးဆောငျ့လိုးလာရာ မိနဈ ၂၀ ခနျ့မြှကြျောလာပွီခါတိုငျးဆိုလြှငျပွီးလိုကျမညျဖွဈသျောလညျးမပွီးရဲ သေး….အဝငျအထှကျမှနျလာပွီးလီးကွီးနှငျ့စောကျဖုတျကွီးတို့ သဟဇာတဖွဈသှားပွီမို့ မရငျမိလညျး တစတစ ကောငျးကောငျးလာ ကာဇိမျနှငျ့ခံနတေော့သညျ။ နာရီဝကျလောကျဆောငျ့ပွီးသောအခါ ကိုကြျောဆှကေ သူ့လီးကွီးကို ပွှတျကနဲ ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။လ ခြောငျးမဲကွီးမှာ စောကျရတှေနှေငျ့ ပို၍ပွောငျလကျ တငျးတောငျနတေော့သညျ။ မရငျမိက မတျတပျရပျကာ ကိုကြျောဆှကေို ကွညျ့၍ မေးငေါ့ပွသညျ။ ဘယျလိုပုံစံနှငျ့ခံရမလဲဟူသော သဘောဖွဈသညျ။ကိုကြျောဆှကေ ကုတငျပျေါ ကနျ့လနျ့သိပျလိုကျပွီး မ ရငျမိတံကောကျကှေးနှဈခြောငျးကို သူ့ပုခုံးပျေါ မတငျ လိုကျသညျ။အံကဖြွဈမဖွဈ သူ့လီးနှငျ့ခြိနျကွညျ့ရာ စောကျဖုတျအဝက အောကျသို့ တျောတျောလေးရောကျနသေညျမို့ ခေါငျးအုံးတဈလုံးဆှဲခုပေးလိုကျသညျ။
သညျတော့မှ အံကိုကျဖွဈသှားသညျ။ကိုကြျောဆှကေ သူ့လီးကွီးကို စောစောကလို ပွနျထိုးလိုကျသညျ။ပေါငျနှဈလုံးက စိနသေညျမို့ စောကျဖုတျက ညပျနပွေီး ဇှတျတိုးဝငျလာသော လီးကွီးဒဏျကို မခံနိုငျဘဲဖွဈနသေညျ။ “……အငျ့…အငျ့…အ….အမေ့….ရှီး… ကြှတျ….ကြှတျ….နာ…နာတယျ…ကိုဆှေ…” သညျတော့ ကိုကြျောဆှကေ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ပုခုံးပျေါမှ ခလြိုကျပွီး ပေါငျနှဈ ခြောငျးကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျကာ ဘေးသို့ခပျကားကားဖွဈအောငျ ဖွဲပေးထားလိုကျသညျ။ သညျတော့မှ အသားဆိုငျထူထူ စောကျဖုတျဖေါငျးဖေါငျးကွီးက ပွူးကနဲ ပှငျ့အာထှကျလာသညျ။ဖွူဝငျးသော ဆီးခုံမို့မို့တဈဝိုကျရှိ စောကျမှေးအုံကွီးမှာ မဲမှောငျ နသေညျ။အပျေါစီးမှ အထငျးသားမွငျနရေသော တိုးတိုးနှငျ့အောငျထှနျးတို့မှာ နှလုံးတုနျ ရငျခုံ အာခေါငျတှခြေောကျပွီး လီးတောငျ ကွလာ၏။ကိုကြျောဆှကေ သူ့လီးကွီးကို ဇှပျကနဲ ဗြိကနဲ ဖိသှငျးလိုကျပွီး အရပျအဆိုငျးမရှိဘဲ ဒလစပျဆောငျ့ပါတော့သညျ။
“…..ဖှပျ…ဖှတျ….ဖှိ……ဘှတျ….ဖှပျ….ဖှိ…ဖှတျ….ဘှတျ…” ဆောငျ့ခကျြတှကေ အရှယျနှငျ့မမြှအောငျ အားပါလှ၏။၁၅ မိနဈ လောကျ ဆောငျ့ပွီးသောအခါ ကိုကြျောဆှတေယောကျ ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ လရတှေကေို ဗငျြးကနဲ ပနျးထညျ့လိုကျ တော့၏။ တနာရီပွညျ့ရနျ ၁၅ မိနဈသာလိုတော့သညျမို့ ဘယျလိုမှ ထိနျးမထားနိုငျတော့..ကိုကြျောဆှတေဈယောကျ သူ့လရတှေေ ကို ပနျးထညျ့ရငျး မကျြစိစုံမှိတျကာ အရသာ ယူနပေါသညျ။ စညျးကမျးခကျြကလညျးရှိနသေညျမို့ လီးကွီးကိုအမွနျခြှတျ၍ ပုံစံတ မြိုး ပွောငျးရနျ အားထုတျရပွနျသညျ။နောကျထပျ ၄၅ မိနဈလိုးပေးရဦးမညျ။အသကျက ပွော၍လားမသိ… ကိုကြျောဆှလေီးကွီးမှာ တျောတျောနှငျ့ပွနျမထသေးဘဲ ငေါငျငေါငျစငျးစငျးကွီး ဖွဈနေ၏။ ငေါငျစငျးစငျးကွီးဖွဈနသေော လီးကွီးကိုကွညျ့၍ တိုးတိုး နှငျ့အောငျထှနျးတို့ သဘောတှကေနြသေညျ။ကိုကြျောဆှကေ သူ့လီးကွီးကို လေးငါးဆယျခကျြခနျ့ ဂှငျးတိုကျပွဈလိုကျရာ လီးကွီး က စောစောကထကျတောငျ့တငျးပွနျမတျလာသညျ။မာနျပွညျ့ဟနျပွညျ့ကား မဟုတျ။
စောကျဖုတျထဲကိုပွနျသှငျးထညျ့ရာ မဝငျခငျြ့ဝငျခငျြ့နှငျ့ဝငျသှားသညျ။ အရငျးကိုမရောကျမှီ ၂ လကျမကြျောလောကျ တှနျ့ကောကျ ပွီးထဈခံနသေညျ။ ကိုကြျောဆှကေ အဆုံးထိ မသှငျးတော့ဘဲ ဝငျသလောကျနှငျ့သာ ခပျမှနျမှနျ ခပျဖွညျးဖွညျးဆောငျ့ပေးနသေညျ။ အားမာနျသှငျး၍ဆောငျ့နရေသျောလညျး စောစောကလို မထနျမသှကျတော့။ ၁၅ မိနဈကြျောသောအခါ အပွညျ့အဝမတောငျပါဘဲ လီးတခုလုံး ယားကွှလာပွီးလရတှေထှေကျကုနျပါတော့သညျ။မာမာထနျထနျသှကျသှကျဆိုလြှငျ မရငျမိလညျး မကွာမှီ ပွီးတော့ မညျမှာ သခြောနေ၏။ အခုတော့ ကိုကြျောဆှကေသာ ပွီးသှားပွီး မရငျမိက မပွီးသေးဘဲ ကနျြရဈခဲ့သညျ။ဟနျလုပျ၍သာ ဆောငျ့ နရေသျောလညျး လီးကွီးက အဝငျအထှကျ မမှနျတော့ တှနျ့ခေါကျ၍ ထဈငေါ့ထဈငေါ့ကွီး ဖွဈနသေညျ။ တဖကျက ဖီလငျမလာ တော့ တှနျ့ခေါကျသှားသော လခြောငျးတံကွီးက မရငျမိ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို ဖိပှတျသလိုမြိုး ဖွဈနသေညျ။ အောငျ့သကျသကျနှငျ့နာကငျြရုံမှအပ အရသာထူးမတှလှေ့ပါ။
မရငျမိက စိတျညဈစှာနှငျ့ “….ဟို…ဟို….ကိုဆှေ…မရရငျလဲ…မလုပျနဲ့တော့နာတာပဲရှိတယျ….ဘာအရသာမှ မရှိဘူး……”မရငျမိ ပွောသောစကားကို တိုးတိုးနှငျ့အောငျထှနျးတို့က ပီပီသသကွီး ကွားလိုကျရသညျ။သူတို့မကျြနှာတှေ ဝငျးထိနျလငျးလကျသှား သညျ။ပထမပှဲစဉျမှာပငျ ကိုကြျောဆှကွေီး ၉၅ ရာခိုငျနှုနျး ရှုံးနိမျ့သှားပွီ။ သူကွိုတငျစားထားသော အားဆေး စိတျကွှဆေးတှကေ သူ့ကိုပညာ ကောငျးကောငျးပွနေ၏။ နှလုံးသှေးခုနျနှုနျးတှေ မွနျဆနျလာပွီး မောဟိုကျလာသညျ။မတတျသာသညျ့အဆုံး သူ့လီး ကွီးကို ဆှဲနှုတျလိုကျပွီး မရငျမိဘေးတှငျ ပကျလကျလှနျအိပျကာ အမောဖွေ နလေိုကျသညျ။၁ နာရီပွညျ့ရနျ ၃၀ မိနဈသာလို တော့သညျ။ “……ရငျမိ…မပွီးသေးဘူးလား…” “…ဟငျ့အငျး….ပွီးတော့မလို့ဘဲ…ကိုကြျောဆှကေမှ ဆကျမလိုးနိုငျဘဲ…” အခုမှ တိုးတိုးနှငျ့အောငျထှနျးတို့ ဟငျးခနြိုငျတော့သညျ။စိုးလှငျ အကွံပေးခကျြအရ ကိုကြျောဆှနှေငျ့မရငျမိတို့ ပွောစကားမြားကို ကကျဆကျနှငျ့ဖမျးယူထားပွီးဖွဈသညျအခွအေနမေဟနျတော့မှနျးသိနသေော ကိုကြျောဆှတေဈယောကျ သညျအတိုငျးကွီး ပနေေ လို့မဖွဈတော့။သညျစညျးဝိုငျးကထှကျပွီး ဝီစကီနှငျ့ စိမျထားသော ဖြံသိုဆေးအရကျကို သောကျမှဖွဈတော့မညျ။သညျထဲက မ ထှကျသမြှ သောကျခှငျ့ရှိမညျမဟုတျ။ကွာလြှငျ သညျ့ထကျပိုဆိုးလာမညျ။
“….မရငျမိ….ပွီးခငျြလား….” ‘….ဟောတျော….ပွီးခငျြတာပေါ့လို့….ဈေးရောငျးအပကျြခံပွီး တျောတို့အလိုးခံမှတော့ မပွီးဘဲမပွနျ နိုငျပါဘူး…..” မရငျမိက စိတျပေါကျလာပွီး ဘုဂလနျ့ပွောခလြိုကျသညျ။သညျအသံတှကေ ကကျဆကျထဲမှာ အကုနျဝငျနသေညျ။ သညျမြှဆိုလုံလောကျပွီမို့ တိုးတိုးက ကကျဆကျ ခလုပျကို ပိတျပဈလိုကျ၏။မကွာမှီ ကိုကြျောဆှတေဈယောကျ ပုဆိုးနှငျ့အကြီ ကောကျဝတျပွီး အခနျးထဲမှထှကျလာသညျ။ အခနျးထဲကခုတငျထကျတှငျ အဝတျအစားကငျးကှာပွီး ဖွူဖှေးဝငျးဝါသော ကိုယျလုံး ကွီးနှငျ့ ခွပေဈလကျပဈ ပကျလကျကွီးအိပျလြှကျရှိသော မရငျမိကို ကွညျ့ရငျး အောငျထှနျးတံတှေးကို ဂှတျကနဲမြိုခလြိုကျသညျ။ အခွအေနမေဟနျတော့မှနျးသိသှားသော ကိုကြျောဆှကေ သူတို့နှဈယောကျကို အခကျြပွပွီး အပွငျချေါထုတျခဲ့သညျ။သူ့ခေါငျးထဲ မှာ စိုးလှငျကို အပိုငျပွနျခညျြနှောငျဘို့ စီမံကိနျးတှေ တထပျကွီးခပြွီးသားဖွဈသှား၏။
အပွငျဘကျက တနျလြားခုံရှညျကွီးပျေါတှငျ စိုးလှငျတယောကျ အေးအေး ဆေးဆေး နှပျနသေညျ။ “….ကဲ….ငါ့တူ…လေးလေး ကတော့ မိနဈငါးဆယျနဲ့တပှဲပွီးသှားပွီ….မငျးရဲ့အခွအေနပေျေါမှာမူတညျပွီးအနိုငျအရှုံးသတျမှတျရမှာပဲ….အခုတော့ လေးလေး ဆေးသောကျမှ ဖွဈမှာမို့ငါ့ရဲ့အခနျးကဏ်ဍကဒီမှာတငျတခနျးရပျသှားပွီ….ဒါပမေဲ့ စညျးကမျးထဲမှာ မပါတဲ့ ပွဿနာတဈခုကငါ သာ၂ခြီပွီးသှားတယျရငျမိကမပွီးသေးဘူးတဲ့ကှသူကလဲမပွီးရငျမကနြေပျဘူးလို့အရေးဆိုလာတယျ….ဒါကွောငျ့မထငျမှတျဘဲ ပျေါပေါကျလာတဲ့ ဒီကဏ်ဍကို မငျးဖွညျ့ပေးလိုကျအုံး……” “…ဟုတျကဲ့…ရပါတယျ…..လေးလေးဆှေ…” ကိုကြျောဆှကေ ဖြံသိုနှငျ့ စိမျထားသော ဝီစကီတဈခှကျကို ငှဲ့သောကျလိုကျသညျ။ သညျတော့မှ အတျောနသောထိုငျသာ ရှိသှားသညျ။ “….ကဲ…စိုး လှငျ……..မရငျမိ ဆန်ဒပွညျ့ဝသှားအောငျဖွညျ့ဆညျးပေးလိုကျပါကှာ..”စိုးလှငျမရငျမိရှိရာအခနျးထဲသို့ဝငျသှားသညျ။“…..ဒီတခါ… အောငျထှနျးကအပွငျက စောငျ့အုံး တိုးတိုးနဲ့ ငါ အခွအေနေ လလေ့ာအုံးမယျ…”စိုးလှငျ ဝငျလာစဉျ မရငျမိတဈယောကျ မကျြလုံး မှေးစငျးလြှကျ ခွပေဈလကျပဈ ကားယားပကျလကျကွီး အိပျလြှကျရှိသညျ။
ပေါငျနှဈလုံးကွားရှိ မရငျမိစောကျဖုတျကွီးမှာ ခုံးကွှမို့မောကျနပွေီး နှုတျခမျးသားထူထူမြားကဘေးသို့အနညျးငယျလနျကာ ခပျ ဟဟကွီးပွဲလြှကျရှိသညျ။စိုးလှငျ တံတှေးတဈခကျြမြိုခလြိုကျပွီးမရငျမိတကိုယျလုံးကို ရာဂကသိုဏျး ရှုရငျးဖွငျ့ပငျ သူ့ပုဆိုးနှငျ့အ ကြီင်ျကို ခြှတျခလြိုကျသညျ။ မရငျမိက စိုးလှငျမှနျးမသိသေး။ကိုကြျောဆှေ ပွနျဝငျလာသညျဟု ထငျမှတျနေ၏။သို့သော သူမဆန်ဒပွညျ့ ဝအောငျလုပျမပေးသေးသဖွငျ့ မကနြေပျစိတျတှေ ဝငျကာ မကျြစိကိုမှိတျ၍ အိပျခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျသညျ။ စိုးလှငျကမရငျ မိ၏နို့အုံတငျးတငျးအိအိကွီးကို လကျဖဝါးနှငျ့ခပျရှရှလေး ပှတျပေးလိုကျသညျ။စူတငျးနသေညျ့ နို့သီးခေါငျးညိုညိုလေးကို လကျညှိုးလကျမနှငျ့ အသာလေးညှပျကာ ခပျရှရှလေး ပှတျခပြေေးသညျ။
ထို့နောကျ မာနျတုနျကွှ၍ ခုံးထပှရှနသေောစောကျဖုတျအကှဲကွီးအတှငျးသို့ သူ့လကျညှိုးကို ထိုးသှငျးကာ လှုပျ၍လှုပျ၍ နှဲ့ ပေးလိုကျ၏။စောကျရတှေရေော လရတှေပေါ အိုငျထှနျးစိုရှဲနသေဖွငျ့ပွှိပွှိ…..ပွှဈ….ပွှဈ….ပှပျ…ပွလပျဟူသော အသံတှေ ထှကျ လာသညျ စောကျဖုတျတဈအုံလုံး ယားကွှလာပွီး တကိုယျလုံး မရိုးမရှဖွဈကာ မရငျမိတကိုယျလုံးလူးလှနျ့တုနျခါသှား၏။ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုကြျောဆှမေဟုတျဘဲ စိုးလှငျ ဖွဈနေ ပါတော့သညျ။စိုးလှငျပေါငျကွားက လီးကွီးမှာ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲမတျတောငျနပေါတော့သညျ လုံးပါတျရောအရှညျပါကိုကြျောဆှထေကျ ရောငျရောငျလေးကွီးပုံရသညျ။ ထူးခွားတာက ကိုကြျောဆှလေီ့းကွီးက ဒဈလနျနပွေီး စိုးလှငျလီးက ဒဈမလနျဘဲ အရပွေားဖုံးထားသော ဒဈထိပျဖူးကွီးဖွဈ၏။ပွီးတော့ ညိုဝါ ရောငျသမျးပွီး နုထှား လှသော လီးကွီးဖွဈ၏။
မရငျမိက စိုးလှငျကို ပွုံးရငျး မကျြစိတဖကျမှိတျပွသညျ။အာရုံအသဈအဆနျး မို့ မရငျမိစိတျတှေ မွူးကွှသှကျလကျလာသညျ။ စောကျဖုတျနှိုကျနသေော စိုးလှငျ လကျကို ဆှဲယူလိုကျပွီးသူမကိုယျလုံးပျေါမှောကျခစြလေိုကျသညျ။ စိုးလှငျကို တငျးနအေောငျ ဖကျ ထားရငျး ပါးကို နမျး၏။ “….မမ…က မပွီးသေးဘူးဆို….” “….အငျး….” “…ဒါမို့ ကြှနျတေျာ့ကို ပှဲသိမျးပေးဖို့ လေးဆှကေ လှတျလိုကျတာ…” စိုးလှငျက မရငျမိ ဖကျထားသောလကျမြားကို အသာဖွလေိုကျပွီး ပေါငျနှဈလုံးကွားတှငျ ဝငျရပျလိုကျသညျ။မ ရငျမိလညျး ကာမစိတျတှပွေနျလညျနိုးကွှလာပွီး သူမ၏စောကျဖုတျကွီးမှာ ကွှသထကျကွှ ရှသထကျရှလာသညျ။ စားသောကျရနျ အသငျ့ဖွဈနသေောစောကျဖုတျဖေါငျးဖေါငျးကွီးထဲသို့ သူ့လီးကွီးကို ဖိနှဈ၍ သှငျးလိုကျသညျ။ စောစောကပငျ လီးအထိုးခံထားရ ပွီးမို့ အဝငျမှာထငျသလောကျ မနာကငျြတော့ အရသာရှိရှိနှငျ့ခံလို့ကောငျးရုံသာ။ စိုးလှငျက လီးကွီးကို တဝကျကြျောကြျောပွနျ နှုတျလိုကျပွီး ခပျသှကျသှကျ ပွနျသှငျးသညျ။ဤကဲ့သို့ လေးငါးဆယျခကျြခနျ့စောကျပတျနှငျ့လီးမိတျဆကျပွီး ခပျသှကျသှကျခပျ ကွမျးကွမျးလေး ဆောငျ့ပါတော့သညျ။ သူ့လကျနှဈဖကျက မရငျမိ၏နို့အုံကွီးကို တလုံးစီဆုတျကိုငျကာ ကိုယျကိုကိုငျး၍အသား ကုနျဆောငျ့ပါတော့သညျ။“…….ဖှတျ….ဖှပျ….ဖှတျ….ပွှတျ…..ဖှတျ….ဖပျ…..ဗဈြ…ဘှတျ….ဖှတျ….ဖှတျ….”
လီးနှငျ့စောကျဖုတျပှတျတိုကျရာမှထှကျပျေါလာသောအသံမြားလဥနှဈလုံးကဖငျရိုကျသံမြားဖွငျ့ တခနျးလုံးဆူညံသှားတော့သညျ။ မရငျမိကလညျး အောကျမှနေ၍ ဖငျဆုံကွီးကို ကော့ကော့ပွီးခံသညျ။စိုးလှငျ ကလညျး ကုနျး၍ ကုနျး၍ အသားကုနျကွုံးကွုံးပွီး ဆောငျ့သညျ။ ၁၅ မိနဈကြျောကြျောဆောငျ့လိုးပွီးသောအခါ မရငျမိတကိုယျလုံး ဓာတျလိုကျသလို တုံခါသှားပွီး ပွီးဆုံးသှားပါ တော့သညျ။စိုးလှငျက မရငျမိပွီးမှနျး သိသျောလညျး မရပျနားဘဲ ဒလစပျဆကျ၍ ဆောငျ့သညျ။ ပွီးလို့ကောငျးတာကတဈမြိုး မနားတမျးဆကျဆောငျ့ပေးနသေညျ့အတှကျ စောကျဖုတျအုံကွီးတဈခုလုံး ကဉျြအီဆိမျ့ကာ အတားအဆီးအကှယျအမဲ့ လဟောနယျ ထဲသို့ လှငျ့မြောနသေလိုမြိုး ခံစားရတာကတဖုံ လူပြိုသိုးတဈယောကျ၏ လီးနုထှားကွီးကို အလိုးခံလိုကျရလို့ ကနြေပျပီတိဖွဈရ တာက တဈနညျး………. အသီးသီး မငွီးနိုငျသော ဝဒေနာတှဆေကျကာ ဆကျကာ ခံစားနရေပါတော့သညျ။ ၁၀ မိနဈကြျောကြျော လောကျအရောကျတှငျ စိုးလှငျက တဈခြီပွီးသှား၏။ မရငျမိက ခံကောငျးဆဲ……… ဤကဲ့သို့ သဲကွီးမဲကွီး အခဈြပှဲဆငျနှဲလာရာ နောကျထပျ ၁၅ မိနဈခနျ့ အရောကျတှငျ နှဈယောကျလုံးပွိုငျတူ ပွီးဆုံးသှားကွ၏။ ပွိုငျတူပွီးလြှငျ ကောငျးနိုငျပါသညျ။
မရငျမိလညျး ပြော့ခှနှေမျးကွသှေားသညျ။သို့သျော သူမမကျြနှာမှာ အပွုံးတှဝေလြှေကျ…… စိုးလှငျက သူ့လီးကွီးကို စောကျဖုတျ ထဲမှ ဆှဲနှုတျလိုကျသညျ။လီးကွီးက မာနျထနဆေဲ ဖွဈ၏။ထို့ကွောငျ့ ဘလှတျ ဟု အသံမမွညျဘဲ ပွှတျ ဟု အသံမွညျသှား သညျ။ အခွအေနကေ နောကျထပျနာရီဝကျလောကျဆှဲနိုငျသေးသညျ့သဘောကို လကျတှပွေ့နေ၏။ ကိုကြျောဆှနှေငျ့တိုးတိုးတို့နှဈ ယောကျ စိုးလှငျကို ကွညျ့၍ အံသွနေ၏။ အခြိနျအားဖွငျ့ တဈနာရီ ပွညျ့ရနျ မိနဈ ၂၀ လိုသေး၏။နောကျထပျ မိနဈ ၃၀ ထပျထညျ့ လိုကျလြှငျ မိနဈ ၇၀ တဈနာရီ ၁၀ မိနဈ…..ကိုကြျောဆှေ စိုးလှငျကို ရှုံးသှားပါပွီ….။ “…..ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရယျ…..ဆှေ မမြေို့းမပေ့ါဘဲ…..အသားတှတေောငျ တုနျတယျကှယျ….မငျး…မိနျးမလိုးဘူးလားဟငျ…” “……ဟုတျကဲ့….လေးဆှသေမီး…..ရီရီ မှနျကို ၅ ခါမက လိုးဖူးပါတယျ…..” စိုးလှငျစကားကွောငျ့ တိုးတိုးမကျြလုံးအစုံပွူးကယျြ သှားသညျ။သူ့ထကျပို၍ ကိုကြျောဆှေ့ မကျြလုံးကွီးတှကေ အဆတဈရာပို၍ ပွူးကယျြသှားပါတော့သညျ။ ပွီးပါပွီ။
“….အေး…ဟုတ်တယ်…..ငါလဲကြားဖူးတယ်…..စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းအုံး ခုပြီး လုပ်မှအားရဆိုဘဲ….ခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်တော့ သားအိမ်ဝက မြင့်တက်လာပြီး လီးထိပ်နဲ့ဆောင့်မိတော့ ပိုကောင်းဆိုဘဲကွ….” တူးတူးက သူကြားဖူးသမျှ ကို အားပါးတရပြောနေစဉ် အောင်ထွန်းက… “….ခေါင်းအုံးခုလိုးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ……မိန်းမတစ်ယောက် စောက်ခေါင်းနက် မနက် ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ…..သူ့ထမီလှန်ပြီး လက်နဲ့ထိုးကြည့်ရမှာလား…” “…..နင့်..အမေကလွှားမှဘဲ….လက်နဲ့ထိုးကြည့်လို့ရမ လားဟ….ပါးကျိုး ထောင်ကျသွားမှာပေါ့……ခွီးစ် တဲ့မှာဘဲ….တုံးလိုက်တာ….” တူးတူးကအောင်ထွန်းကိုကလော်တုတ်လိုက် သည်။“…..ဒါဖြင့်ရင်….စောက်ခေါင်းနက် မနက်သိဘို့ ပြောလေကွာ…” အောင်ထွန်းက သူ့အမေကို ထိပါးပြီးပြောလာသော တူး တူးကို မကျေမနပ်သံဖြင့် မေးလိုက်၏။
“…..ပြောလိမ့်မပေါ့ကွာ…မင်းကိုက လောနေတဲ့ဥစ္စာ “ ဘာစကားမှ မပြောဘဲငြိမ်နားထောင်နေသော စိုးလွင်က ကြားဝင်ပြော လိုက်သည်။ “….ငါဖတ်ဖူးတဲ့ ကာမသျှတ္တရ စာအုပ်ထဲမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပေါ့လေ…. ဖင်ကောက်တဲ့မိန်းမဟာ…စောက် ခေါင်းနက်သတဲ့ကွ……သာမာန်ကိုမဟုတ်ဘဲ… သိသိသာသာကောက်တဲ့မိန်းမပေါ့ကွာ…” “…..အော်….အေး..အေး…ရွာတောင်ပိုင်း က ပဲပြုတ်သည် မရင်မိ လိုပေါ့နော်..” အောင်ထွန်းကလည်း သူ့ဝသီအတိုင်း ဝင်ထောက်ခံသည်။စိုးလွင်က အောင်ထွန်းကို မကျေ မနပ်နှင့် မျက်စောင်းထိုးလိုက်၏။ “….နောက်တစ်ခါကိုမြင့်ကျော်တို့ပြောတာလဲကြားဖူးတယ်ကွ….ချက်နဲ့စောက်ဖုတ်ဟာ သိသိ သာသာကြီးသာမာန်ထက်ဝေးကွာနေရင်လဲစောက်ခေါင်းနက်ဆိုဘဲငါတွေးကြည့်တယ်ပေါ့ကွာ…..ဖင်က အဆမတန်ကောက်မှ တော့…ချက်နဲ့ စောက်ဖုတ်က အလိုလိုဝေးပြီးပေါ့ကွ…ဒီတော့ သေချာပေါက်ကို စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ အမျိုးအစားလို့သိရမှာ ဘဲ….စောက်ခေါင်းနက်တဲ့မိန်းမရဲ့ယောကျာ်းဟာလီးတိုအမျိုးအစားဆိုရင်တော့ သေချာပြီမောင်ရေ…..ဒီမိန်းမ အားမရလို့ လင်ငယ်နေမှာဘဲ…..”
“….တောက်…ဟုတ်လိုက်လေကွာ….တူးတူး….တူးတူးနဲ့ တို့အထဲမှာ ထူးခြားနေတာက ဒီလိုမျိုးဗဟုသုတတွေ နှံ့စပ်လို့ ကိုး….စောစောကပြောတဲ့ မရင်မိကြီးကလင်ငယ်နေတယ်မောင်….ကိုကျော်ဆွေရယ်ကိုနက်ကြီး..ရယ်..ဦးစံမြင့်ရယ်…. (၃)ယောက်တောင်ဘဲ ခင်မျာ…..” “…..ခွေးမသား….မသိပဲနဲ့ရမ်းပြောနေ…စောက်ပြဿနာတက်နေမယ်….” တူးတူးက ခပ်ချဉ် ချဉ်နှင့် ပြောပြစ်လိုက်သည်။စိုးလွင်ကတော့ ဘာမှမပြော အောင်ထွန်းက အလွန်စောက်မြင်ကပ်စွာမျက်စောင်းထိုးလိုက်သည်။“… အေးမင်းပြောတဲ့ပေတံနဲ့ထောက်ပြီး မှန်းဆကြည့်ရင် မရင်မိယောကျာ်း ကိုသန်းဆွေဟာသေချာပေါက်လီးတိုရမယ်ကွ…တိုရုံ တောင်မကဘူး…သေးတောင် သေးချင်မှာ….”အောင်ထွန်းကတော့ မျက်စောင်းထိုးထိုး…..ဆဲဆဲ..သူ့ညဉ်ကိုတော့ လုံးဝမဖျောက်။ အခုကြည့် ——– သူပြောချင်ရာကို ဇွတ်ပြောသည်။တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဉာဉ်စရိုက်ခြင်း မတူကြသော်လည်း ငယ်ငယ်ကထဲက လည်ပင်းဖက်ကြီးလာသော တစ်ရွာတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် သက်တူ-ရွယ်တူ-အတန်းတူဘဝတူသူငယ်ချင်းအရင်းခေါက် ခေါက်တွေ မဟုတ်ပါလား။
“…ဒါနဲ့…နေစမ်းပါအုံး…ကိုကျော်ဆွေ…ကိုနက်ကြီး…ဦးစံမြင့်တို့ သုံးယောက်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ မရင်မိ ဇာတ်လမ်းပြောစမ်းပါအုံး…ဟုတ် ကော ဟုတ်လို့လားကွ…မင်းက သိပ်စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး…” တူးတူးက အောင်ထွန်းကို အရေးတယူမေးလာသည့်အတွက် အောင်ထွန်းတစ်ယောက် ဘဝင်မြင့်သွားသည်။ဒီကောင်က မြှောက်ပေးရင် ဂွေးပေါ်အောင်ကမည့်လူစား။ ဆဲဆဲဆိုဆို ပြုံးဖြီးဖြီးနေ တတ်တဲ့ အကောင်။ အခု သူ့ကို တူးတူးက အရေးတယူ မေးလာသောအခါ သဘောတွေ စွတ်ကျသွား၏။ နှုတ်နည်းသော စိုးလွင် သည်ပင် အောင်ထွန်းစကားကို အလွန်သိချင်ကြားချင် နေကြောင်း သူ့မျက်လုံးတွေက သက်သေခံနေ၏။ “…ဒီလိုကွ…ကိုကျော် ဆွေတို့နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အမေရယ်…မချစ်ရယ်… မနုရယ် သုံးယောက်သား ဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေတာကို ငါကကြားလိုက်ရတာ..အဲဒီ နေ့က ငါနေမကောင်းလို့ အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာ…သူတို့သုံးယောက်က သန်းရှာရင်း မရင်မိ စောက်တင်းတွေ ချနေကြတာပေါ့ ကွာ…”
“….ဟား..ဟား…ဟိုသီချင်းလိုပေါ့နော်…သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပါ… စပ်မိစပ်ရာ…ဘာညာကွိကွ…ဟားဟား အေးအေး လုပ်စမ်းပါအုံး…ဒို့ကလဲ တဆင့် ကွိကွရအောင်…” တူးတူးအပြောကြောင့်စိုးလွင်မျက်နှာကြီးသည်ပင် ပြုံးပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်လာ တော့၏။ အားပါးတရ နားထောင်မည့်ဟန်ကအပြည့်။ အောင်ထွန်းက တက်ကြွသော အသံနှင့် သူ့စကားကို ပြန်ဆက်သည်။ “….မရင်မိ အကြောင်းကို သူတွေ့သမျှ ဖောက်သည်ချတာက မနုရယ်….သူပြောတာက ဒီလိုကွ…..” သည်နေ့ ကိုကျော်ဆွေထံမှ ယူထားသော ငွေတစ်သောင်းအတွက် တစ်လပြည့်၍ အတိုးသတ်ရန် မနုထွက်လာသည်။စောစောပေးပြီး အေးတာပဲဟူသော စိတ်ကူးဖြင့်နေ့လည်စာထမင်းစားပြီးထွက်လာသည်။ကိုကျော်ဆွေသည် ရွာထဲက အိမ်တွင်မနေဘဲ ရွာအပြင်ဘက်ရှိ သူပိုင် သရက် ခြံထဲတွင် နေထိုင်၏။သရက်ခြံက ပေနှစ်ရာကျော်ပတ်လည်ရှိ၍ အတော် ကျယ်ဝန်းသည်။အဓိကအားဖြင့် ရင်ကွဲမျိုးသန့်များကို စိုက်ပျိုးထားသည်။
သည်သရက်ခြံကရသောငွေမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် သိန်းချီဝင်သည်။ဂျုံ-ပဲ-မြေပဲ ပဲစင်းငုံများလှောင်၍ ဈေးကောင်းရမှ ထုတ်ရောင်း သဖြင့် သူ့လက်ဖျားတွင် ငွေသီးနေသည်။တစ်ရွာလုံး သူ့အကြွေးနှင့် ကင်းသူရှားသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က သူ့မိန်းမဆုံးသွား ရာ………………….. နောက်အိမ်ထောင်မပြုတော့ဘဲ မုဆိုးဖိုဘဝနှင့်နေထိုင်လျှက် ရှိသည်။ အသက်က ၄၀ ကျော်ရုံသာရှိ ပြီ….အရွယ်တင် ကျန်းမာသန်စွမ်း၏။ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် ရသေးသော်လည်း အပိုဒုက္ခမရှာတော့ဘဲ…အချောင်ရနိုင်သည့်စားကွင်း စားကွက်များနှင့်သာပျော်မွေ့နေသည်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိရာ သမီးအကြီးက ၂၀ ကျော်၊သားအငယ်က ၁၇ နှစ် ရွာထဲကအိမ်တွင် ကိုကျော်ဆွေ့အမ အပျိုကြီးနှင့် အတူနေကြသည်။ သူကမူ သရက်ခြံထဲတွင် နှစ်စဉ် ၃ ခန်းမြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်၍ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်သည်။ မနုတစ်ယောက် ကိုကျော်ဆွေထံအလာတွင် အိမ်သာတက်ချင်၍ သရက်ခြံ အနောက်ဖက်ကပ်လျှက်ရှိ ချောင်းထဲသွား၍ အိမ်သာတက်သည်။ကိစ္စဝိစ္စပြီးတော့ ချောင်းဘက်ကတက်လာပြီး သရက်ခြံနောက်ဖေးဘက်က အလွယ်တကူ ဝင်လာခဲ့သည်။နေ့လည်နေ့ခင်းဖြစ်၍ လူသူတိတ်ဆိတ်နေသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကိုကျော်ဆွေ မြေစိုက်အိမ်နားရောက်လာသည်။ ဘာရယ် ညာရယ်မဟုတ် မိန်းမပီပီ စပ်စုချင်၍ ကိုကျော်ဆွေ့ အိမ်အတွင်းသို့ ထရံအပေါက်မှ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။သူချောင်းကြည့်သော နေရာက အိမ်နောက်ခန်း။ အခန်းတွင်း မြင်လိုက် ရသော မြင်ကွင်းက မနုကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေသည်။ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်တွင် မရင်မိနှင့် ကိုကျော်ဆွေတို့ အဝတ်အစားမပါဗလာကိုယ်တုံးလုံးကြီးနှင့်ကာမဇာတ်ခင်းနေကြသည်။ မရင်မိက ခါးအောက်တွင် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးခုထားပြီး ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားဖြင့် ခံလျှက်ရှိပြီး………. ကိုကျော်ဆွေက ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဒူးထောက်ထိုင်ကာ သူ့လက်နှစ် ဖက်ကို မရင်မိ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျော်ခွပြီး ကုန်း၍ ကုန်း၍ ဆောင့်လိုးနေသည်။ ကိုကျော်ဆွေ၏ ဆောင့်ချက်တွေက မာန်ပါပြင်းထန် လှသည်။မရင်မိ ကလည်း ကိုကျော်ဆွေ၏ခါးကို တင်းနေအောင်ဖက်လျှက် ဖင်ဆုံကြီးကို ပင့်ထိုး မြှောက်ကော့လျှက် အားရပါးရခံ နေသည်။ “…ဖွတ်…ဖွတ်…ဖွပ်…ဘွတ်….” “….ဖွတ်….ဖွတ်…ဖွပ်….ဘွတ်….” “….အမေ့….အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ ကို ကျော်ဆွေရဲ့…အင့်…ရှီး ကျွတ်.. ကျွတ် လိုးပါ…ဆောင့်ဆောင့်လိုးစမ်းပါ…” သည်မျှအထိ ဆောင့်လိုးနေတာတောင် ဆောင့်ခိုင်းပုံ ထောက်၍ မရင်မိ ကာမရာဂ စိတ်တွေ မည်မျှထကြွသောင်းကြမ်းနေကြောင်း သိသာလွန်းလှသည်။
တောသူဆိုသော်လည်း မရင်မိ အသားအရည်တွေက တရုတ်မတစ်ယောက်လို အလားနီးစပ်သူဖြစ်၏။ရင်၊တင်၊အသား အရောင်….ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ကြည့်သောအားဖြင့် တဏှာရာဂ အလွန်ကြီးမားသော ဟတ္ထနီအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကို ကျော်ဆွေက လက်နှစ်ဖက်ထောက်၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရာမှ ဘယ်လက်ကို ရုတ်လိုက်ပြီးမရင်မိနို့အုံဖွေးဖွေးမို့မို့တင်းတင်းကြီး ပေါ်အုပ်တင်လိုက်လျှက်ပွတ်ချေလူးလှိမ့်လိုက်သည်။ “…..ထိရဲ့လား….ရင်မိ…” “…အား…အမေ့….အင်း….ထိ…ထိတယ်…..ကို ကျော်ဆွေရဲ့….အီး..ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာရှင်…..” စောက်ဖုတ်ကြီး….လီးကြီးတွေမို့လားမသိ….ဖွတ်…ဖတ်… ဘွတ်… ဟူသော အသံကြီး တွေက ကြက်သီးထအသဲယားစရာ ကောင်းလွန်းလှပါသည်။မနုတစ်ယောက် ချောင်းကြည့်နေရင်းက ပင်စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး ပုရွက်ဆိတ်အကောင်တစ်ရာ တက်လာသလို တရွရွနှင့် ထကြွလာသည်။
ရင်တွေပူ အာခေါင်တွေ ချောက်လာသဖြင့် တံတွေးကို မကြာခဏ မျိုချနေရ၏လည်ပင်းကြောကြီးတွေထောင်ကာ သူကလည်း အသည်းအသန် ချောင်းကြည့်နေ၏ ကိုကျော်ဆွေ ဖင်ကြောကြီးတွေက ကျုံ့ဝင်ရှုံ့ခွက်နေပြီး ခပ်သွက်သွက်ကြီး ကပ်ညှောင့် နေသည်။ “….ဖွတ်…ရွှတ်…ဖွစ်…ဖွတ်….” “….အား….အမလေး….ထိ….ထိလိုက်တာရှင်….သားအိမ်ဝကို ပူရှိန်းကျဉ်ဆိမ့်နေတာ ဘဲ အ…ဟ….ဟင့်…အမေ့…အမလေး….အေ့…..စောက်စိပါထိသတော့….အားလားလား… အီးအီးရှီး…အ……” မရင်မိတကိုယ် လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်လျှက် ကိုကျော်ဆွေခါးကြီးကို တင်းကျပ် နေအောင် ဖက်ထားသည်။ ကိုကျော်ဆွေ့ လက်နှစ်ဖက်က အနည်းငယ်တုတ်သယောင်ယောင်ရှိသော ရင်မိခါးကို ဆုတ်ကိုင်လျှက် ခေါင်းမော့ကိုယ်မတ်ကာ သူ့လီးကြီးကို အဆုံးထိ ဖိ ကပ်ထားလိုက်ပြီး လရေတွေကို ပန်းထည့်နေသည်။သူ့ကိုယ်လုံးကြီးလည်း ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်တုန်သွား၏။
အခြေအနေအချိန်အခါ သိသူပီပီ ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျှက်အညိုရောင်သမ်း နေသောလီးတုတ်ရှည်ကြီးကမကျေနပ်သောဟန်နှင့်မာန်ဟုန်မပြေသေးသည့် အမူအယာကိုပြနေသေး၏။ မနုတစ်ယောက် ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ထိ ကြည့်ချင်လွန်းလှသော်လည်း အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် စောစောက သူမ ချီးပါခဲ့ရာ ချောင်းထဲသို့ ပြန် ဆင်းလာခဲ့သည်။ လီးအတွေ့အကြုံနောကျေထားပြီးဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည် မိန်းမပင် ဖြစ်လင့်ကစား ကိုကျော်ဆွေ့ လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ဖင်ယားအဖုတ်တောင် ရမ္မက်သွေးတွေ ပူလောင်ဆူပွက်ခဲ့ရ၏။ “….မင်းဇာတ်လမ်းက ကောင်းလွန်းလို့ မျက်လုံးထဲမှာ ကွင်းကနဲ…ကွက်ကနဲကို မြင်လာတော့တာပဲကွာ…ငါတောင် မရင်မိကြီးကို ချချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာပြီ…”
“…အလကားတော့ မရလောက်ဘူး ကိုယ့်လူ…ငွေချေးနိုင်မှ… ဒါမှ အတိုးမယူဘဲ လိုးလွှတ်လို့ရမှာပေါ့ကွ….” အောင်ထွန်းက သူ့ ထင်မြင်ချက်ကို ခပ်ဆဆလေး ပြောလိုက်၏။ “….တဏှာကြီးတဲ့မိန်းမအဖို့ ငွေကပဓာန မဟုတ်ပါဘူးကွာ…လီးက အဓိကပါ..” အခု ဝင်ပြောသူက စိုးလွင်…စိုးလွင်က သည်ပွဲတွင် သူ့ဉာဉ်အတိုင်း ဘာမှဝင်မပြောဘဲ အသာနားထောင်ခဲ့သည်။သည်လိုလူမျိုးက အပြောသမားမဟုတ် လက်တွေ့လုပ်မည့် သူမျိုး။နောက်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်စိတ်ချသောဟန်အပြည့်နှင့် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ “…..အေး….ဒါလဲ …..ဟုတ်ပါရဲ့….” စိုးလွင်စကားကို တိုးတိုးက ထောက်ခံလိုက်၏။
“…ဘယ်လောက်ပဲ တဏှာကြီးကြီး အညှာကိုင်တတ်ရင် အရည်တောင် ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်ကွာ…”တိုးတိုးက စိုးလွင်စကားကိုပင် သေချာအောင်ထပ်ဆင့်၍ ထောက်ခံပြောလိုက်သည်။ “….လုပ်ပါအုံး…တိုးတိုးရ….အညှာဆိုတာ ဘာတုံးဟ…” ထုံးစံအတိုင်း အောင်ထွန်းက သိချင်ဇောနှင့်အမောတကော မေးလိုက်၏။ သည်တခါတော့ စိုးလွင်က သူ့ကို မျက်စောင်း မထိုးတော့ပါ… အူကြောင်ကြောင် မြောက်ကြွကြွသူငယ်ချင်းကို ပြုံးလျှက်သာ ကြည့်လိုက်ပါတော့သည်။ “…..အညှာဆိုတာ စောက်စိပေါ့ ကွာ….စောက်စိကလိတတ်ရင်…ကာမမီးတွေ ပွင့်ထွက်ပြီး ဘယ်မိန်းမခံနိုင်မှာလဲ…ဒါပေမဲ့ မရင်မိလိုဟာကြီးကတော့ အထွေအထူး တောင် ကလိစရာလိုမှာမဟုတ်ဘူး…လီးကြီးဖို့နဲ့ခပ်ကြာကြာအလိုးသန်ဘို့ဘဲလိုမှာ.. မင်းက ဒီမိန်းမကြီးကို…ဖြိုနိုင်လို့လား….”
တိုးတိုးက အောင်ထွန်းကို အဓိကဦးတည်ပြီး မေးငေါ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိုးလွင်ကလည်း ဘယ့်နှယ့်လဲဟူသော အမူအရာနှင့် အောင်ထွန်းကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ စကားပေါ နှုတ်သွက်သော အောင်ထွန်းတစ်ယောက် အသံတိတ် နှုတ်ဆိတ်ရင်း ခေတ္တတွေး နေသည်။ “…..အင်း…မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်….တိုးတိုးရေ…အလိုးသန်တယ်ပဲ ထားအုံး… ကိုယ့်ဒင်က စံချိန်မှီရုံပဲ..ရှိတယ် လေ….ဒီတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အယားဖျောက် ပေးသလောက်ပဲရှိမှာပေါ့…ဟီး…ဟီး….” “….အေး…မင်း မဆိုးဘူး….ကိုယ့် ပမာဏကို သိတယ်…”စိုးလွင်က အောင်ထွန်းစကားကို ဝင်ထောက်ခံလိုက်၏။အောင်ထွန်းက သူ့ကို သရော်သည်ထင်၍ ဘုကြည့် ကြည့်နေစဉ် တိုးတိုးကဝင်၍… “…..စိုးလွင် ပြောတာအမှန်ပဲ အောင်ထွန်းရ….မင်းက သူ့ကို တလွဲမထင်နဲ့….မင်း မပြောနဲ့…ငါလဲ မ ရင်မိကို မဖြိုနိုင်ဘူးမောင်….တကယ်ပြောတာ သူ့အသားအရေကြည့် အသားနီစပ်…ဖင်ဆုံကြီးကလဲ..နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး…
ပြီး တော့ နောက်ကောက်ထွက် နေတာလဲအထင်အရှားလိုးတော့လိုးချင်စရာကြီးပေါ့ကွာ….ဟား ဟား…ဒါပေမဲ့ ဟတ္ထနီရဲ့ သဘာဝက အလိုးလဲကြမ်း…လီးလဲကြီးမှ…ကျေနပ်တာဘဲကွ… ဒီတော့ မနိုင်ဝန်သွားထမ်းရင် မင်းတို့ငါတို့ဘဲ ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျသွားမှာပေါ့ ဟ…” “….အင်း ဒီလိုဆို…..သူ့ကိုဖြိုနိုင်တာ ကိုကျော်ဆွေဘဲ နေမှာပေါ့နော်…” “…..လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ထဲမှာတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ် မှာပေ့….မင်းတို့ငါတို့ တက်ခေတ်လူတွေထဲမှာ..လောလောဆယ်..ဒ်ီမိန်းမကြီးကို အပြတ်ဖြိုနိုင်မှာကတော့.. ဟောဒီ စိုးလွင်ဘဲ မောင်ရင်….” “…..ဟာ…ဟုတ်ပါ့မလားကွာ…” “….မင်းကဲ…ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအကြောင်း…သိရက်သားနဲ့…ဒီကောင့်လော်က ငယ် ငယ်ကထဲက ဒို့ထက်ကြီးတယ်လေ…သူကလက်တွေ့သမား…အခြေခံ စံချိန်မှီ လီးကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးနေတာ…အခု ဆိုရင် စံချိန်တောင် အတော်လွန် နေပြီ….ပြီးတော့ မင်းတို့ ငါတို့ထက် လူကောင်ကထွားပြီးတောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တယ်လေ လက်လှဲ ရင်…..ဒို့….သူ့ကို ဘယ်တုံးကနိုင်ဘူးလို့လဲ….”
“….အေး…အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ်…ဒါပေမဲ့…ဒီကောင့်ဒုတ်ကြီး စံချိန်လွန် ဖြစ်သွားတာတော့ တကယ်မသိဘူးကွ…” “….သူငယ်ချင်း….သေချာသွားအောင် ပြလိုက်စမ်းပါကွာ…” တိုးတိုးက စိုးလွင်ကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ စိုးလွင်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ပုဆိုးကို ခပ်ဟဟ လှန်ပြလိုက်သည်။ အားပါးပါး…..နည်းတဲ့လီးကြီး မဟုတ်ပါလား… အတုတ်က ရုပ်ပျို ဆေးဗူးခန့်ရှိပြီး အရှည်က ရှစ်လက်မခန့်ရှိမည်။လီးကြီးက အောက်ခြေတွင်ကွပ်ပြစ်ကြီးပေါ်တွင် ခေါင်စင်းစင်းကြီးလဲလျောင်း တွဲလဲကျနေ၏။ ဒစ်လည်းမပြဲသေး….ထိပ်ဖူးချွန်ကြီးနှင့်ဖြစ်၏။လီးကြီးက အဝါဘက်လုသော အညိုရောင်ဖြစ်၏။စိုးလွင်က ပြန်ဖုံး ပြီး ထိုင်လိုက်သည်။သူ့မျက်နှာမှာလည်း ပန်းနုရောင် ပြေး၍ ပြုံးရောင်သန်းနေသည်။
“….အေး…ဟုတ်ပါပြီ…..မရင်မိ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြိုနိုင်မဲ့လီးကြီးဆိုတာ ယုံပါပြီကွာ ဟား..ဟား…ဟား….” အောင်ထွန်းက သူငယ်ချင်းအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်စွာ ပြောလိုက်သည်။တိုးတိုး ကလည်း အောင်ထွန်းစကားကို ဖြည့်စွက်ထောက်ခံ၏။“……အခု ချိန်မှာတော့ မရင်မိရဲ့စောက်ဖုတ်သရဖူကြီးကို ချန်ပီယံ ကိုကျော်ဆွေကပိုင်ချင်ပိုင်ထားမှာပေါ့ကွာ….ဒါပေမဲ့ ဒီစောက်ဖုတ်သရဖူ ကြီးကို ပြိုင်လုမဲ့ ပြိုင်ဘက်ချန်ပီယံစိုးလွင်ရှိနေပြီလေ….ပြီးတော့ဟိုကလေးဆယ်ကျော်ကျလူပါ….ဒို့ကောင်က အားကောင်း မောင်းသန် ပျိုရွယ်ဟန် အပြည့်ရှိတဲ့ (၁၈)နှစ်ကျော် လူပျိုသိုးပဲကွ…..ဟား ဟား…ဟား…” “…..ဟာ….ဒီလိုဆို…ဟုတ်ပီကွ….”
တိုးတိုးစကားနှင့် ရယ်သံအဆုံးတွင် အောင်ထွန်းအလန့်တကြားထအော်ပါတော့သည်။“….ဟ..ဘာလဲဟ….လခွီးတဲ့မှဘဲ….မင်းဟာ က အလန့်တကြားကွာ…” စိုးလွင်က အောင်ထွန်းကို ထကြိမ်းသည်။အရယ်အမောအရှိန်ကြောင့်သာ။အောင်ထွန်း ထအော်လိုက်ပုံ က တိုးတိုးသည်ပင် လန့်သွား၍ ထောင်းကနဲ ဒေါခီးသွားမိသည်။ “….ဒီလို…ဒီလို…ငါ့စိတ်ကူးက ဒီလို…မရင်မိကို ကိုကျော်ဆွေနဲ့ စိုးလွင်တို့ ပြိုင်လိုးကြမယ်ကွာ….လောင်းကြေးကို သိန်းချီတင်မယ်လေ…” “….အေး..ကောင်းတယ်…” အောင်ထွန်း တင်ပြချက် ကို တိုးတိုးက ထောက်ခံ၏။တိုးတိုးက တဆက်တည်း စိုးလွင် ဘက်ကိုလှည့်၍ “…..ဘယ်နှယ့်လဲ….ဟေ့ကောင်….” “….လုပ် လိုက်လေ….ကြာသလားလို့….” ကိုကျော်ဆွေနှင့် အကျေအလည်ညှိပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန် ရက်သတ်မှတ်သည်။ မရင်မိနှင့်ညှိရန် ကိုကျော်ဆွေကို သဘောတူ တာဝန်ပေးကြသည်။ဤသို့ဖြင့် သတ်မှတ်ရက်တွင် ပြိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်းပ၏။
ကိုကျော်ဆွေ-တူးတူး+အောင်ထွန်း+စိုးလွင် တို့သည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်၏။ ပထမအချီတွင် အနှုးအနှပ်မပါဘဲ တစ်နာရီခွဲဆက်တိုက်လိုးရမည်။ ကြိုက်သလို ပုံစံနှင့်လိုးနိုင်သည်။လိုးခွင့်ရှိသည်။အလိုးခံသူက တော်ပါတော့ဟု ဆိုမှ ပွဲရပ်မည်။ ဒုတိယအချီတွင် အနှုးအနှပ် အနှိုက်အဆွ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်သည်။ အချိန်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ။သို့သော် ၂ နာရီထက်ကျော်လျှင် အရှုံးဟု သတ်မှတ်သည်။ မိန်းမကိုယ်တိုင်က တော်ပါပြီဟု အလေးအနက်အဆိုပြုလာမှ ပွဲရပ်မည်။အလိုးခံ မည့်သူသည် နောက်တစ်ရက်ဆက်တိုက်ခံနိုင်လျှင် အရှုံး။မခံနိုင်လောက် အောင်ပျော့ခွေချိနဲ့၍ မလုပ်ပါသေးနှင့်ဦးဟု တောင်းပန်ပါ က အနိုင်။ ဤအရှုံးအနိုင်သတ်မှတ်ချက်သည် အလိုးခံသူမိန်းမနှင့် မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။ ပြိုင်ပွဲမစမီ ရက်များတွင် စားဆေး-လိမ်းဆေး ကြိုက်ရာသုံးနိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲစမည့်နေ့တွင်မူ မည်သည့်အရာမှ မသုံးစွဲရ…အထူးသဖြင့်လိမ်းဆေးလုံးဝမသုံးရ။
မိမိကိုယ်ကို ယောကျာ်းပီသသူဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံကြည်လျှင် လိမ်းဆေးလုံးဝ မသုံးသင့်ကြောင်း အထူးသတိပြုပါ။(မှတ်ချက်) လောင်းကြေးငွေကို သုံးသိန်းခွဲစီ သတ်မှတ်သည်။နိုင်သူက မရင်မိကို တစ်သိန်းတိတိပေးရမည်။ထိုနေ့က သူတို့လေးယောက် ည ၁၁ နာရီခွဲကျော်မှ စည်းမျဉ်းရေးဆွဲပြီးကြသည်။ ကိုကျော်ဆွေက သူ့ကိုယ်သူအပိုင်တွက်၍ အကယ်၍ သူရှုံးခဲ့လျှင် ဟောဒီ သရက် ခြံကြီးတဝက်ပါ ထပ်လောင်း၍ ပေးဦးမည်ဟု ပြော၏။ထိုအချက်ကိုလည်း စည်းမျဉ်းထဲတွင် နောက်တိုးအဖြစ် ဖြည့်စွက်လိုက် သည်။ အကယ်၍ သူနိုင်ခဲ့လျှင် မင်းတို့(၃)ယောက်ရဲ့ အမေတွေကို (၃)ညစီ လိုးရလိမ့်မည်။မင်းတို့ကိုယ်တိုင် ခေါ်ခဲ့ရမည်ဟု အဆိုပြုသည်။
သုံးယောက်သား ခေါင်းခြင်းရိုက်၍ သဘောတူလိုက်ကြသည်။ မတတ်နိုင် သူ့ဘက်ကလည်း ရက်ရောသည်မဟုတ်လား။ “နေအုံး ဗျ…..ခင်များအဆိုကို ကျုပ်တို့မကန့်ကွက်ပါဘူး….ဒါပေမဲ့ ခင်များပြောတဲ့ မိန်းမသုံးယောက်က ကျုပ်တို့ရဲ့အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တို့မှာ ဂိုဏ်းသင့်နိုင်တယ်…….ဒီတော့ သရက်ခြံ တဝက်မလုပ်ပါနဲ့.. သရက်တစ်ခြံလုံးလုပ် လိုက်ပါ….” ဤစကားကို စိုးလွင်က ဝင်ပြောခြင်းဖြစ်၏။တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့မှာခေါင်းတွေပူထူနေသဖြင့် ဘာမှ စဉ်းစားလို့ အကြံမရ…သူတို့အမေတွေကိုထိပါးမည့်အရေးကြုံလာတော့ ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်သွားကြသည်။ စကားနည်းလှသော စိုးလွင်က သာ ထောက်ပြအဆိုပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကျော်ဆွေက မည်သို့မှ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ……….. “….အေး….စိမ်လိုက် ကွာ…..တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်….အဲဒီနေ့ကျ ငါအရင်ဖိုက်မှာ…” “….ကျေနပ်ပါတယ်……” စိုးလွင်ကပင် အတည်ပြုထောက်ခံ လိုက်သည်။ ဒီနေ့…..ကိုကျော်ဆွေ စတင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရမည်နေ့ မရင်မိတစ်ယောက် ရေမိုးချိုး သနပ်ခါး လိမ်း၍ ခါတိုင်းလိုပင် ပဲပြုတ် ရောင်းထွက်သည်။ခါတိုင်းလည်း လူသူမကွဲမှီ ဝေလီဝေလင်း အနောက်ဖက်ရွာသို့ ပထမ ရောင်းလေ့ရှိသည်။
အနောက်ဖက်ရွာရောင်းမကုန်မှ ရွာထဲလိုက်ရောင်းသည်။အနည်းဆုံး ၉ နာရီကျော်မှသာ အိမ်ပြန် ရောက်လေ့ရှိသည်။ အနည်းဆုံး သူဈေးရောင်းချိန် ၃ နာရီကျော် ပုံမှန်ကြာလေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကား ကလေးလူကြီးပါမကျန် တရွာလုံးသိနေသော မ ရင်မိဈေးရောင်းချိန် ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကိုတမင်ရွေးလိုက်ကြသည်။သည်တော့မည်သူမှမသိနိုင်မရိပ်မိနိုင်တော့… စောစောကမူ အချိန်ရွေးဘို့အတွက် အခက်တွေ့နေကြရာ သည်အကြံကို စိုးလွင်က ပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေ ပြေလည်သွားတော့၏။ ကိုကျော် ဆွေတစ်ယောက် သူ့ပြိုင်ဘက်စိုးလွင်ကို လျှော့မတွက် သာတော့……သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ သိပ်အထင်ကြီးနေ၍ နွားပျိုသန်လှ…. နွားအိုပေါင်ကျိုးဟူသော စကားပုံကို အသေစွဲကိုင်ထား၍ သိပ်တော့မဖြုံလှပါ။ လူလုံးမကွဲခင်မှာပင် မရင်မိတစ်ယောက် ပဲပြုတ် တောင်းလေးခေါင်းပေါ် ရွက်၍ သရက်ခြံအနောက်ဘက်ချောင်းထဲမှ ဝင်လာသည်မကြာခင်လုပ်ငန်းစပါတော့သည်။တိုးတိုးတို့ ၃ ယောက်က သီးသန့် လုပ်ထားသောနေရာမှ ကြည့်နေကြသည်။ဤနေရာကို မရင်မိ မသိအောင် ဝှက်ထားကြ သည်။သိလျှင် စိတ်အ နှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ဖီလင်မလာမှစိုး၍ ဖြစ်၏။
မရင်မိက သူ့ကိုပေါ်က အဝတ်အစားများကို တခုခြင်းချွတ်သည်သူ့ကိုယ်မှာဖုံးထားသောအရာဟူ၍ထမီပါးပါးတထည်…..အပေါ်အ ကျီင်္လက်တိုတထည်နို့အုံပင်လုံအောင်မဖုံးနိုင်သောဘရာစီယာခပ်သေးသေးတစ်ထည်သည်သာ…. ထို့ကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပင် ကမ္ဘာဦးလူမကဲ့သို့ တုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ အခန်းထဲတွင် ပုံစံမျိုးစုံလုပ်နိုင်ရန် ၂ ပေခွဲအမြင့် စားပွဲခုံရှည်…. နောက်မှီ ခုံရှည် အလတ်စားတစ်လုံးအဆင်သင့်ချထား၏။တိုးတိုးတို့သုံးယောက်ကို အလယ်ခန်း အထက်စီးမှကြည့်နိုင်ရန်လျှို့ဝှက်စီစဉ်ပေး ထား၏။စိုးလွင်ကမူ ပြိုင်ဘက်မင်းသားဖြစ်၍ အပြင်ဘက်မှာသာနေပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ရန်သတ်မှတ် ထားသည်။ ကိုကျော်ဆွေက မရင်မိကို ခုတင်ဘောင်တန်းပေါ် လက်ထောက်ပြီး ရှေ့သို့ ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။သူက နောက်မှ နေ၍ သူ့လီးတုန်ကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ တစ်ရစ်ချင်းဖိသွင်းလိုက်သည်ချောင်းကြည့်နေသော တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့ မျက်လုံးပြူးသွားကြ၏။ ကိုကျော်ဆွေ လီးကြီးက နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်။လီးချောင်းကြီးက နက်မှောင်နေပြီး သွေးကြော ဖုကြီး တွေ ယှက်သမ်းနေသည်။စိုးလွင် လီးနှင့်မတိမ်းမယိမ်းပင်………ဒစ်ပြဲ အသားဆိုင်ကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်…သံခမောက်ကြီးလို ဝင်းပြောင်နေ၏။
သမ္ဘာရင်…ဝါရင့်ဆရာကြီးလည်းဖြစ်…လီးကြီးကလည်း စိုးလွင်နှင့် မတိမ်းမယိမ်းမို့ တိုးတိုးနှစ်ယောက် ရင်ခုံနေသည်ဖီလင်တက် စရာအလွန်ကောင်းသော မရင်မိကိုယ်လုံးကြီးကို မြင်နေရလျှက်ကပင် ဖီးလ်မကြွနိုင်ဘဲ ရင်တမမဖြစ်နေကြသည်။ သူတို့ရှုံးခဲ့ လျှင် သူတို့အမေများကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကိုကျော်ဆွေထံ ဆက်သရမည်ကို တွေးမိတိုင်း စိတ်တွေချောက်ခြားနေ၏။သူ တို့ကိုယ်တိုင် ဆပ်ဆော့မိသည့် အမှားမို့ နောင်တစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ စောစောကပင် ခံချင်စိတ်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီး တ အုံလုံးကြွရွနေပြီး စောက်ရေတွေကလည်း ထွက်နှင့်ပြီးသားမို့ လီးကြီးက ထစ်ငေါ့ ထစ်ငေါ့နှင့် အဆုံးထိ ဝင်သွားသည်။သည်လီး ကြီးကို ခံဘူးထားသော်လည်း စံချိန်လွန်လီးမဟာကြီးမို့ မရင်မိ တစ်ယောက် တစ်ထစ်ခြင်း တစ်ထစ်ခြင်းတိုးဝင်လာသော လီးကြီး ကို မျက်လုံးမှိတ် အံကြိတ်ရင်းခံနေရှာသည်။တစ်ချက်တစ်ချက် ဖင်ဆုံကြီးတွေ ကော့တက်သွား၏။ ကိုကျော်ဆွေက ခါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်၍ ခပ်ပြင်းပြင်းပင် ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ပထမဆောင့်သောအချိန်ကို စတင်သတ်မှတ်သည်မို့ တစ်ဖက်နံရံရှိ တိုင်ကပ်နာရီကို ကြည့်လိုက်သည်။(၆)နာရီမတ်တင်း….။
“……ဖွပ်…ရွှတ်…ဖွတ်….ရွှတ်….ဖွတ်…..” “….အင့်….အမေ့…အီး…အား….ဟား… ဟင်း….အင့်..အင်း…အ….အား…” ခပ်သွက်သွက် ခပ်မှန်မှန်ကြီးဆောင့်လိုးလာရာ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှကျော်လာပြီခါတိုင်းဆိုလျှင်ပြီးလိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းမပြီးရဲ သေး….အဝင်အထွက်မှန်လာပြီးလီးကြီးနှင့်စောက်ဖုတ်ကြီးတို့ သဟဇာတဖြစ်သွားပြီမို့ မရင်မိလည်း တစတစ ကောင်းကောင်းလာ ကာဇိမ်နှင့်ခံနေတော့သည်။ နာရီဝက်လောက်ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို ပြွတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။လ ချောင်းမဲကြီးမှာ စောက်ရေတွေနှင့် ပို၍ပြောင်လက် တင်းတောင်နေတော့သည်။ မရင်မိက မတ်တပ်ရပ်ကာ ကိုကျော်ဆွေကို ကြည့်၍ မေးငေါ့ပြသည်။ ဘယ်လိုပုံစံနှင့်ခံရမလဲဟူသော သဘောဖြစ်သည်။ကိုကျော်ဆွေက ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်သိပ်လိုက်ပြီး မ ရင်မိတံကောက်ကွေးနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ် မတင် လိုက်သည်။အံကျဖြစ်မဖြစ် သူ့လီးနှင့်ချိန်ကြည့်ရာ စောက်ဖုတ်အဝက အောက်သို့ တော်တော်လေးရောက်နေသည်မို့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးဆွဲခုပေးလိုက်သည်။
သည်တော့မှ အံကိုက်ဖြစ်သွားသည်။ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို စောစောကလို ပြန်ထိုးလိုက်သည်။ပေါင်နှစ်လုံးက စိနေသည်မို့ စောက်ဖုတ်က ညပ်နေပြီး ဇွတ်တိုးဝင်လာသော လီးကြီးဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘဲဖြစ်နေသည်။ “……အင့်…အင့်…အ….အမေ့….ရှီး… ကျွတ်….ကျွတ်….နာ…နာတယ်…ကိုဆွေ…” သည်တော့ ကိုကျော်ဆွေက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်မှ ချလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ် ချောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ဘေးသို့ခပ်ကားကားဖြစ်အောင် ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။ သည်တော့မှ အသားဆိုင်ထူထူ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပြူးကနဲ ပွင့်အာထွက်လာသည်။ဖြူဝင်းသော ဆီးခုံမို့မို့တစ်ဝိုက်ရှိ စောက်မွှေးအုံကြီးမှာ မဲမှောင် နေသည်။အပေါ်စီးမှ အထင်းသားမြင်နေရသော တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့မှာ နှလုံးတုန် ရင်ခုံ အာခေါင်တွေချောက်ပြီး လီးတောင် ကြလာ၏။ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို ဇွပ်ကနဲ ဗျိကနဲ ဖိသွင်းလိုက်ပြီး အရပ်အဆိုင်းမရှိဘဲ ဒလစပ်ဆောင့်ပါတော့သည်။
“…..ဖွပ်…ဖွတ်….ဖွိ……ဘွတ်….ဖွပ်….ဖွိ…ဖွတ်….ဘွတ်…” ဆောင့်ချက်တွေက အရွယ်နှင့်မမျှအောင် အားပါလှ၏။၁၅ မိနစ် လောက် ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုကျော်ဆွေတယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လရေတွေကို ဗျင်းကနဲ ပန်းထည့်လိုက် တော့၏။ တနာရီပြည့်ရန် ၁၅ မိနစ်သာလိုတော့သည်မို့ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင်တော့..ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် သူ့လရေတွေ ကို ပန်းထည့်ရင်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အရသာ ယူနေပါသည်။ စည်းကမ်းချက်ကလည်းရှိနေသည်မို့ လီးကြီးကိုအမြန်ချွတ်၍ ပုံစံတ မျိုး ပြောင်းရန် အားထုတ်ရပြန်သည်။နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်လိုးပေးရဦးမည်။အသက်က ပြော၍လားမသိ… ကိုကျော်ဆွေလီးကြီးမှာ တော်တော်နှင့်ပြန်မထသေးဘဲ ငေါင်ငေါင်စင်းစင်းကြီး ဖြစ်နေ၏။ ငေါင်စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော လီးကြီးကိုကြည့်၍ တိုးတိုး နှင့်အောင်ထွန်းတို့ သဘောတွေကျနေသည်။ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဂွင်းတိုက်ပြစ်လိုက်ရာ လီးကြီး က စောစောကထက်တောင့်တင်းပြန်မတ်လာသည်။မာန်ပြည့်ဟန်ပြည့်ကား မဟုတ်။
စောက်ဖုတ်ထဲကိုပြန်သွင်းထည့်ရာ မဝင်ချင့်ဝင်ချင့်နှင့်ဝင်သွားသည်။ အရင်းကိုမရောက်မှီ ၂ လက်မကျော်လောက် တွန့်ကောက် ပြီးထစ်ခံနေသည်။ ကိုကျော်ဆွေက အဆုံးထိ မသွင်းတော့ဘဲ ဝင်သလောက်နှင့်သာ ခပ်မှန်မှန် ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပေးနေသည်။ အားမာန်သွင်း၍ဆောင့်နေရသော်လည်း စောစောကလို မထန်မသွက်တော့။ ၁၅ မိနစ်ကျော်သောအခါ အပြည့်အဝမတောင်ပါဘဲ လီးတခုလုံး ယားကြွလာပြီးလရေတွေထွက်ကုန်ပါတော့သည်။မာမာထန်ထန်သွက်သွက်ဆိုလျှင် မရင်မိလည်း မကြာမှီ ပြီးတော့ မည်မှာ သေချာနေ၏။ အခုတော့ ကိုကျော်ဆွေကသာ ပြီးသွားပြီး မရင်မိက မပြီးသေးဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ဟန်လုပ်၍သာ ဆောင့် နေရသော်လည်း လီးကြီးက အဝင်အထွက် မမှန်တော့ တွန့်ခေါက်၍ ထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ကြီး ဖြစ်နေသည်။ တဖက်က ဖီလင်မလာ တော့ တွန့်ခေါက်သွားသော လချောင်းတံကြီးက မရင်မိ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖိပွတ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေသည်။ အောင့်သက်သက်နှင့်နာကျင်ရုံမှအပ အရသာထူးမတွေ့လှပါ။
မရင်မိက စိတ်ညစ်စွာနှင့် “….ဟို…ဟို….ကိုဆွေ…မရရင်လဲ…မလုပ်နဲ့တော့နာတာပဲရှိတယ်….ဘာအရသာမှ မရှိဘူး……”မရင်မိ ပြောသောစကားကို တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့က ပီပီသသကြီး ကြားလိုက်ရသည်။သူတို့မျက်နှာတွေ ဝင်းထိန်လင်းလက်သွား သည်။ပထမပွဲစဉ်မှာပင် ကိုကျော်ဆွေကြီး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှုံးနိမ့်သွားပြီ။ သူကြိုတင်စားထားသော အားဆေး စိတ်ကြွဆေးတွေက သူ့ကိုပညာ ကောင်းကောင်းပြနေ၏။ နှလုံးသွေးခုန်နှုန်းတွေ မြန်ဆန်လာပြီး မောဟိုက်လာသည်။မတတ်သာသည့်အဆုံး သူ့လီး ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီး မရင်မိဘေးတွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ကာ အမောဖြေ နေလိုက်သည်။၁ နာရီပြည့်ရန် ၃၀ မိနစ်သာလို တော့သည်။ “……ရင်မိ…မပြီးသေးဘူးလား…” “…ဟင့်အင်း….ပြီးတော့မလို့ဘဲ…ကိုကျော်ဆွေကမှ ဆက်မလိုးနိုင်ဘဲ…” အခုမှ တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့ ဟင်းချနိုင်တော့သည်။စိုးလွင် အကြံပေးချက်အရ ကိုကျော်ဆွေနှင့်မရင်မိတို့ ပြောစကားများကို ကက်ဆက်နှင့်ဖမ်းယူထားပြီးဖြစ်သည်အခြေအနေမဟန်တော့မှန်းသိနေသော ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် သည်အတိုင်းကြီး ပေနေ လို့မဖြစ်တော့။သည်စည်းဝိုင်းကထွက်ပြီး ဝီစကီနှင့် စိမ်ထားသော ဖျံသိုဆေးအရက်ကို သောက်မှဖြစ်တော့မည်။သည်ထဲက မ ထွက်သမျှ သောက်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်။ကြာလျှင် သည့်ထက်ပိုဆိုးလာမည်။
“….မရင်မိ….ပြီးချင်လား….” ‘….ဟောတော်….ပြီးချင်တာပေါ့လို့….ဈေးရောင်းအပျက်ခံပြီး တော်တို့အလိုးခံမှတော့ မပြီးဘဲမပြန် နိုင်ပါဘူး…..” မရင်မိက စိတ်ပေါက်လာပြီး ဘုဂလန့်ပြောချလိုက်သည်။သည်အသံတွေက ကက်ဆက်ထဲမှာ အကုန်ဝင်နေသည်။ သည်မျှဆိုလုံလောက်ပြီမို့ တိုးတိုးက ကက်ဆက် ခလုပ်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်၏။မကြာမှီ ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် ပုဆိုးနှင့်အကျီ ကောက်ဝတ်ပြီး အခန်းထဲမှထွက်လာသည်။ အခန်းထဲကခုတင်ထက်တွင် အဝတ်အစားကင်းကွာပြီး ဖြူဖွေးဝင်းဝါသော ကိုယ်လုံး ကြီးနှင့် ခြေပစ်လက်ပစ် ပက်လက်ကြီးအိပ်လျှက်ရှိသော မရင်မိကို ကြည့်ရင်း အောင်ထွန်းတံတွေးကို ဂွတ်ကနဲမျိုချလိုက်သည်။ အခြေအနေမဟန်တော့မှန်းသိသွားသော ကိုကျော်ဆွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကို အချက်ပြပြီး အပြင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။သူ့ခေါင်းထဲ မှာ စိုးလွင်ကို အပိုင်ပြန်ချည်နှောင်ဘို့ စီမံကိန်းတွေ တထပ်ကြီးချပြီးသားဖြစ်သွား၏။
အပြင်ဘက်က တန်လျားခုံရှည်ကြီးပေါ်တွင် စိုးလွင်တယောက် အေးအေး ဆေးဆေး နှပ်နေသည်။ “….ကဲ….ငါ့တူ…လေးလေး ကတော့ မိနစ်ငါးဆယ်နဲ့တပွဲပြီးသွားပြီ….မင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်ရမှာပဲ….အခုတော့ လေးလေး ဆေးသောက်မှ ဖြစ်မှာမို့ငါ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဒီမှာတင်တခန်းရပ်သွားပြီ….ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းထဲမှာ မပါတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကငါ သာ၂ချီပြီးသွားတယ်ရင်မိကမပြီးသေးဘူးတဲ့ကွသူကလဲမပြီးရင်မကျေနပ်ဘူးလို့အရေးဆိုလာတယ်….ဒါကြောင့်မထင်မှတ်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဒီကဏ္ဍကို မင်းဖြည့်ပေးလိုက်အုံး……” “…ဟုတ်ကဲ့…ရပါတယ်…..လေးလေးဆွေ…” ကိုကျော်ဆွေက ဖျံသိုနှင့် စိမ်ထားသော ဝီစကီတစ်ခွက်ကို ငှဲ့သောက်လိုက်သည်။ သည်တော့မှ အတော်နေသာထိုင်သာ ရှိသွားသည်။ “….ကဲ…စိုး လွင်……..မရင်မိ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါကွာ..”စိုးလွင်မရင်မိရှိရာအခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။“…..ဒီတခါ… အောင်ထွန်းကအပြင်က စောင့်အုံး တိုးတိုးနဲ့ ငါ အခြေအနေ လေ့လာအုံးမယ်…”စိုးလွင် ဝင်လာစဉ် မရင်မိတစ်ယောက် မျက်လုံး မှေးစင်းလျှက် ခြေပစ်လက်ပစ် ကားယားပက်လက်ကြီး အိပ်လျှက်ရှိသည်။
ပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိ မရင်မိစောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ခုံးကြွမို့မောက်နေပြီး နှုတ်ခမ်းသားထူထူများကဘေးသို့အနည်းငယ်လန်ကာ ခပ် ဟဟကြီးပြဲလျှက်ရှိသည်။စိုးလွင် တံတွေးတစ်ချက်မျိုချလိုက်ပြီးမရင်မိတကိုယ်လုံးကို ရာဂကသိုဏ်း ရှုရင်းဖြင့်ပင် သူ့ပုဆိုးနှင့်အ ကျီင်္ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ မရင်မိက စိုးလွင်မှန်းမသိသေး။ကိုကျော်ဆွေ ပြန်ဝင်လာသည်ဟု ထင်မှတ်နေ၏။သို့သော သူမဆန္ဒပြည့် ဝအောင်လုပ်မပေးသေးသဖြင့် မကျေနပ်စိတ်တွေ ဝင်ကာ မျက်စိကိုမှိတ်၍ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ စိုးလွင်ကမရင် မိ၏နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးကို လက်ဖဝါးနှင့်ခပ်ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်သည်။စူတင်းနေသည့် နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးကို လက်ညှိုးလက်မနှင့် အသာလေးညှပ်ကာ ခပ်ရွရွလေး ပွတ်ချေပေးသည်။
ထို့နောက် မာန်တုန်ကြွ၍ ခုံးထပွရွနေသောစောက်ဖုတ်အကွဲကြီးအတွင်းသို့ သူ့လက်ညှိုးကို ထိုးသွင်းကာ လှုပ်၍လှုပ်၍ နှဲ့ ပေးလိုက်၏။စောက်ရေတွေရော လရေတွေပါ အိုင်ထွန်းစိုရွှဲနေသဖြင့်ပြွိပြွိ…..ပြွစ်….ပြွစ်….ပွပ်…ပြလပ်ဟူသော အသံတွေ ထွက် လာသည် စောက်ဖုတ်တစ်အုံလုံး ယားကြွလာပြီး တကိုယ်လုံး မရိုးမရွဖြစ်ကာ မရင်မိတကိုယ်လုံးလူးလွန့်တုန်ခါသွား၏။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကျော်ဆွေမဟုတ်ဘဲ စိုးလွင် ဖြစ်နေ ပါတော့သည်။စိုးလွင်ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲမတ်တောင်နေပါတော့သည် လုံးပါတ်ရောအရှည်ပါကိုကျော်ဆွေထက် ရောင်ရောင်လေးကြီးပုံရသည်။ ထူးခြားတာက ကိုကျော်ဆွေ့လီးကြီးက ဒစ်လန်နေပြီး စိုးလွင်လီးက ဒစ်မလန်ဘဲ အရေပြားဖုံးထားသော ဒစ်ထိပ်ဖူးကြီးဖြစ်၏။ပြီးတော့ ညိုဝါ ရောင်သမ်းပြီး နုထွား လှသော လီးကြီးဖြစ်၏။
မရင်မိက စိုးလွင်ကို ပြုံးရင်း မျက်စိတဖက်မှိတ်ပြသည်။အာရုံအသစ်အဆန်း မို့ မရင်မိစိတ်တွေ မြူးကြွသွက်လက်လာသည်။ စောက်ဖုတ်နှိုက်နေသော စိုးလွင် လက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီးသူမကိုယ်လုံးပေါ်မှောက်ချစေလိုက်သည်။ စိုးလွင်ကို တင်းနေအောင် ဖက် ထားရင်း ပါးကို နမ်း၏။ “….မမ…က မပြီးသေးဘူးဆို….” “….အင်း….” “…ဒါမို့ ကျွန်တော့်ကို ပွဲသိမ်းပေးဖို့ လေးဆွေက လွှတ်လိုက်တာ…” စိုးလွင်က မရင်မိ ဖက်ထားသောလက်များကို အသာဖြေလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဝင်ရပ်လိုက်သည်။မ ရင်မိလည်း ကာမစိတ်တွေပြန်လည်နိုးကြွလာပြီး သူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကြွသထက်ကြွ ရွသထက်ရွလာသည်။ စားသောက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသောစောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို ဖိနှစ်၍ သွင်းလိုက်သည်။ စောစောကပင် လီးအထိုးခံထားရ ပြီးမို့ အဝင်မှာထင်သလောက် မနာကျင်တော့ အရသာရှိရှိနှင့်ခံလို့ကောင်းရုံသာ။ စိုးလွင်က လီးကြီးကို တဝက်ကျော်ကျော်ပြန် နှုတ်လိုက်ပြီး ခပ်သွက်သွက် ပြန်သွင်းသည်။ဤကဲ့သို့ လေးငါးဆယ်ချက်ခန့်စောက်ပတ်နှင့်လီးမိတ်ဆက်ပြီး ခပ်သွက်သွက်ခပ် ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပါတော့သည်။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က မရင်မိ၏နို့အုံကြီးကို တလုံးစီဆုတ်ကိုင်ကာ ကိုယ်ကိုကိုင်း၍အသား ကုန်ဆောင့်ပါတော့သည်။“…….ဖွတ်….ဖွပ်….ဖွတ်….ပြွတ်…..ဖွတ်….ဖပ်…..ဗျစ်…ဘွတ်….ဖွတ်….ဖွတ်….”
လီးနှင့်စောက်ဖုတ်ပွတ်တိုက်ရာမှထွက်ပေါ်လာသောအသံများလဥနှစ်လုံးကဖင်ရိုက်သံများဖြင့် တခန်းလုံးဆူညံသွားတော့သည်။ မရင်မိကလည်း အောက်မှနေ၍ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကော့ပြီးခံသည်။စိုးလွင် ကလည်း ကုန်း၍ ကုန်း၍ အသားကုန်ကြုံးကြုံးပြီး ဆောင့်သည်။ ၁၅ မိနစ်ကျော်ကျော်ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ မရင်မိတကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို တုံခါသွားပြီး ပြီးဆုံးသွားပါ တော့သည်။စိုးလွင်က မရင်မိပြီးမှန်း သိသော်လည်း မရပ်နားဘဲ ဒလစပ်ဆက်၍ ဆောင့်သည်။ ပြီးလို့ကောင်းတာကတစ်မျိုး မနားတမ်းဆက်ဆောင့်ပေးနေသည့်အတွက် စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ကျဉ်အီဆိမ့်ကာ အတားအဆီးအကွယ်အမဲ့ လေဟာနယ် ထဲသို့ လွင့်မျောနေသလိုမျိုး ခံစားရတာကတဖုံ လူပျိုသိုးတစ်ယောက်၏ လီးနုထွားကြီးကို အလိုးခံလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရ တာက တစ်နည်း………. အသီးသီး မငြီးနိုင်သော ဝေဒနာတွေဆက်ကာ ဆက်ကာ ခံစားနေရပါတော့သည်။ ၁၀ မိနစ်ကျော်ကျော် လောက်အရောက်တွင် စိုးလွင်က တစ်ချီပြီးသွား၏။ မရင်မိက ခံကောင်းဆဲ……… ဤကဲ့သို့ သဲကြီးမဲကြီး အချစ်ပွဲဆင်နွှဲလာရာ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်ခန့် အရောက်တွင် နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူ ပြီးဆုံးသွားကြ၏။ ပြိုင်တူပြီးလျှင် ကောင်းနိုင်ပါသည်။
မရင်မိလည်း ပျော့ခွေနွမ်းကြေသွားသည်။သို့သော် သူမမျက်နှာမှာ အပြုံးတွေဝေလျှက်…… စိုးလွင်က သူ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ် ထဲမှ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။လီးကြီးက မာန်ထနေဆဲ ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် ဘလွတ် ဟု အသံမမြည်ဘဲ ပြွတ် ဟု အသံမြည်သွား သည်။ အခြေအနေက နောက်ထပ်နာရီဝက်လောက်ဆွဲနိုင်သေးသည့်သဘောကို လက်တွေ့ပြနေ၏။ ကိုကျော်ဆွေနှင့်တိုးတိုးတို့နှစ် ယောက် စိုးလွင်ကို ကြည့်၍ အံသြနေ၏။ အချိန်အားဖြင့် တစ်နာရီ ပြည့်ရန် မိနစ် ၂၀ လိုသေး၏။နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ ထပ်ထည့် လိုက်လျှင် မိနစ် ၇၀ တစ်နာရီ ၁၀ မိနစ်…..ကိုကျော်ဆွေ စိုးလွင်ကို ရှုံးသွားပါပြီ….။ “…..ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်…..ဆွေ မေ့မျိုးမေ့ပါဘဲ…..အသားတွေတောင် တုန်တယ်ကွယ်….မင်း…မိန်းမလိုးဘူးလားဟင်…” “……ဟုတ်ကဲ့….လေးဆွေသမီး…..ရီရီ မွန်ကို ၅ ခါမက လိုးဖူးပါတယ်…..” စိုးလွင်စကားကြောင့် တိုးတိုးမျက်လုံးအစုံပြူးကျယ် သွားသည်။သူ့ထက်ပို၍ ကိုကျော်ဆွေ့ မျက်လုံးကြီးတွေက အဆတစ်ရာပို၍ ပြူးကျယ်သွားပါတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သရဖူ ဗိုလျလုပှဲ
ဒဝေီစံအိမျကွီးနှငျ့ မောငျပီယတို့ သားအဖ